Oovimba boMdlalo wamanqindi be-Amateur- Inombolo yeBhokisi yeBhola yaseYurophu eyiNombolo 1
UJohnny “Nicco” Tapia oneminyaka eli-16 ubudala wenza i-ateur yokuqala ngoNovemba wama-20
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo, Iindaba Zamanqindi	UJohnny “Nicco” Tapia, UJohnny Tapia	0
Ngelixa inyambalala yabafundi abancinci bezikolo zamabanga aphakamileyo bezixhalabisa ngamanqaku ovavanyo amiselweyo kunye nokungenisa izicelo zasekholejini, uJohnny “Nicco” Tapia, unyana omncinci nowabizwa ngokuba yintshatsheli yehlabathi yamaxesha amahlanu, uya kuqalisa ukufuna ikhondo lakhe lebhola yamanqindi xa esenza intswahla. umdlalo wokuqala kwinxalenye yokuqala kaMama uTeresa kaMarco Antonio Barrera vs. Daniel Ponce de Leon ohlawulela ikhadi lokulwa ngoMgqibelo, ngoNovemba wama-20, 2021.
“Umdlalo wamanqindi ngumdlalo wamanqindi,” utshilo umfana oneminyaka eli-16 ngoku esebenzela ukufumana idiploma yakhe kwi-Intanethi. "Ndiyakuthanda ukungena eringini, ukubethwa, kwaye ndive amandla esihlwele."
Ngomhla wama-20 kaNov. isiganeko esiphambili, amaqhawe amabini aseMexico aya kuqhina iiglavu ngobusuku bokugqibela xa iHolo yeFamer uMarco Antonio Barrera (67-7, 44 KOs) ebuyela kwiringi okwesibini kuphela kwisithuba esingaphezu kweminyaka elishumi. ukuya isikweri ngokuchasene owayesakuba yintshatsheli yehlabathi amaxesha amabini Daniel Ponce de Leon (45-7, 35 KOs). Umboniso onemijikelo emithandathu ye-super welterweight kunye neentsimbi ezine ezongezelelweyo ziya kudlala ngokuphila ngokujonga kwi-Inn ye-Mountain Gods Resort & Casino eMescalero, eNew Mexico.
I-FITE PPV kunye ne-Golden Boy Fight Night ku-Facebook Bukela i-Paid Online iya kumabonakude i-five-bout main card live on pay per view for $9.99 at 4:30 pm PT /5:30 pm MT/7:30 pm ET
Inzalelwane yaseLas Cruces, NM, uNicco uqeqesha kwigaraji yasekhaya yaseTapia, uyakonwabela ukufunda iSociology ukuze “ajonge abantu ngenye indlela,” akayithandi imathematika, kwaye okwangoku akanazicwangciso zokuqhubela phambili nomsebenzi wakhe wokufunda emva kokuphumelela kwakhe isidanga ngo-2023.
“Andizimiselanga ukuya ekholejini,” watsho umlandeli womculo ocula i-freestyle ngexesha lakhe lokuphumla. "Ndifuna ukuqhubeka ndizityhala eringini kwaye ndijike ndibe yipro kamsinya nje ukuba ndifumene amava awoneleyo."
Ejikelezwe yinzululwazi emnandi kwasebuntwaneni, uNicco ujonge ngasemva kwiinkumbulo ezingenakubalwa ezifudumezayo zokubukela uyise eziqeqeshela imilo ezayo.
“Ndandimane ndisiya ejimini ndibaleka noTata yonke imihla. Yathi yakukhala intsimbi, ndaphakamisa iiglavu kunye naye.”
Ngaphandle komdlalo wamanqindi, uyise nonyana bachitha ixesha elisemgangathweni bedlala eminye imidlalo, besonwabela izimuncumuncu, becula neenkqubo zikamabonwakude abazithandayo.
“Sasidla ngokuya epakini, sidlale ibhola yomnyazi, kwaye sitsibe kwitrampoline,” ukhumbula oko uNicco. “UTata wayedla ngokundinika iisandwich ze-ayisikrimu. Ndikhumbula ndisiya egumbini lakhe sibukele inkqubo ethi 'Amapolisa' kunye."
Ejonge ukufumana inkuthazo kunye nokufumana iingcebiso zomdlalo wamanqindi komnye wabadlali abakhulu bamanqindi, uNicco omncinci uhlala ejonga kwakhona iibhola zakudala zikaJohnny.
“Ndifunda isantya sakhe, ukuhamba kwentloko nama-engile,” watsho njalo okwishumi elivisayo oxelisa uTata wakhe noMarvellous Marvin Hagler.
Xa ecelwa ukuba achaze umlo wakhe awuthandayo u-“Mi Vida Loca”, uNicco akazange alibazise ekudweliseni uloyiso luka-Johnny Tapia olwalwelwa nzima kugxa wakhe wase-Albuquerquean nowayesakuba yintshatsheli yehlabathi uDanny Romero kumawonga e-IBF/WBO junior bantamweight ngoJulayi 18, 1997, eLas. Vegas, Nev.
“Isihlwele sasingalawuleki yaye siphambene,” ukhumbula oko uNicco. “Ndiyakuthanda ukufunda ubuchule bukaTata bamanqindi.”
Yayicwangciselwe ukulwa e-Inn of the Mountain Gods nge-31 kaJulayi, 2021, umdlali owayesakuba ngumdlali we-viola waphuma kwi-amateur yakhe yokuqala xa wophuka isandla.
“Ndandidlala ibhola ekhatywayo nabahlobo bam ndaza ndawela esandleni sam ndiphosakele,” wakhalaza watsho omnye owayenempepha zokuqhuba. “Ibikokokuqala ndenzakala.”
Ngaphantsi kweenyanga ezine kamva, uNicco uzimisele ukuvuyisa isihlwele saseMescalero ngoNovemba 20 ngaphambi kokuba uBarrera noDe Leon bathathe indawo ephambili.
"Ndithatha iintsuku kwaye andinakulinda ukuba bufike obu busuku."
Ukuqalisa imibhiyozo, iGolden Boy Fight Night kuFacebook Bukela kuFacebook.com/GoldenBoyFN kunye noFITE baya kusasaza i-Nicco Tapia's debut kunye nezinye ezine ezigqwesileyo ezibalaseleyo zokulwa simahla ngo-2 pm PT/3 pm MT/5 pm ET.
Usasazo lolwimi lwesiSpanish luya kufumaneka njengokhetho lokujonga kuzo zombini intlawulo-ngokubonayo kunye neyokuqala.
Abo banethemba lokuzimasa umlo ongalibalekiyo, we-Tapia Promotions extravaganza ngomntu unokuthenga amatikiti aqala kwi-10 yeedola nge-innofthemountangods.com kunye ne-TicketMaster.com ngokukhangela "La Ultima Batalla-Indawo Yokugqibela."
Itumente yamanqindi yehlabathi iza kubanjelwa eMongolia
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Mongoliya, Ukhnaagiin Khürelsükh, Umar Kremlev	0
NgoLwesihlanu, uMongameli waseMongolia Ukhnaagiin Khürelsükh wabamba ulwamkelo lwabathunywa abakhokelwa nguMongameli we-International Boxing Federation (AIBA) Umar Kremlev.
UMnu. Kremlev ucebise ukubamba itumente enkulu yamanqindi yamazwe ngamazwe eMongolia, kwakunye nokuseka iziko lamanqindi kweli lizwe. Umongameli uKremlev uthe uceba ukuphumeza inani leeprojekthi kunye neenkqubo ezidibeneyo kunye neMongolian Boxing Association.
“Ndingathanda ukwenza umbulelo ongazenzisiyo kwiNtloko yelizwe, uMnu. Khürelsükh, iMongolian Boxing Federation kunye noMphathiswa wezeMidlalo ngenkxaso yabo engagungqiyo kwimidlalo yehlabathi kunye ngakumbi ngakumbi namanqindi. Ukusasazwa kwendlela yokuphila esempilweni phakathi kwesizukulwana esitsha kufuneka kube lelinye lamalungelo karhulumente welizwe ngalinye.' UMnu. Kremlev wabanga.
'IMongolia inazo zonke iimeko eziyimfuneko zokusingatha imisitho yemidlalo emikhulu kwinqanaba lamazwe ngamazwe ukuqala kwiindawo, amabala kunye namathuba okuhlala.' Umongameli we-AIBA wongezelela.
“Singawaxhasa nawaphi na amanyathelo aza kunceda uphuhliso lwamanqindi, ngokukodwa, omnye wemidlalo emine ephezulu eMongolia. Ndiyavuya kuba i-AIBA kunye neMongolian Boxing Federation banobudlelwane obusondeleyo bobuchule kunye namabhongo ahambelanayo ', ugxininisile uMongameli waseMongolia.
Namhlanje, uMongameli we-International Boxing Federation udibene nabadlali, ootitshala kunye nabaqeqeshi beqela lesizwe kunye nabantwana ababandakanyeka kumdlalo wamanqindi kulo lonke elaseMongolia.
Kwakhona uMnu. Kremlev kunye namagosa e-Mongolian Boxing Federation kunye noMnu Khishgee, iLungu le-State Great Hural Minister of Justice kunye neMicimbi yaseKhaya yaseMongolia, batyelela iindawo ezininzi zezemidlalo kwaye babamba iingxoxo ezininzi ezidibeneyo kunye neeseshoni zokucwangcisa.
Umongameli we-AIBA udibana nezona mbethi manqindi zibalaseleyo zaseMongolia
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Mongoliya, Umar Kremlev	0
Le ndibano iyinxalenye yenkqubo yothethathethwano kaMongameli, enjongo yayo ikukunika zonke iimbethi manqindi ithuba lokumanyelwa.
Ngexesha lotyelelo lwakhe e-Ulan Bator, eMongolia, uMongameli we-AIBA u-Umar Kremlev wadibana neembethi manqindi ezikumgangatho ophezulu, eziselula kunye nezincinci zeqela lesizwe lamanqindi kwaye wathatha inxaxheba kwiseshoni yoqeqesho kunye nabo.
'Sifuna ukuba yonke imbethi manqindi yazi ukuba i-AIBA likhaya layo. Sizama ukudala zonke iimeko eziyimfuneko kule nto. Iimbethi manqindi kunye nabaqeqeshi ngabona bantu babalulekileyo kusapho lwe-AIBA', utshilo uMongameli Kremlev.
Ekubeni uMnu. Kremlev uye waba nguMongameli we-AIBA, uye wabamba iintlanganiso ezininzi zomntu kunye nabadlali kunye nabaqeqeshi kumazwe amaninzi ukuthetha nabo ngokukhululekileyo kunye ngqo malunga nokuguqulwa okuqhubekayo kwe-AIBA kunye nokuqonda kangcono iimfuno zabo.
'Kuliwonga elikhulu ukubulisa u-Umar Kremlev kwilizwe lethu. Ndibona okokuqala ukuba uMongameli we-AIBA uqeqesha kunye neembaleki kwaye unikezela ingqwalasela enkulu kwiimbethi-manqindi, abaqeqeshi kunye ne-National Federations ', uNyambaatar Khishgee, iLungu le-State Great Hural Minister for Justice and Home Affairs of Mongolia.
'IMongolia lelinye lamagunya embethi manqindi ase-Asiya afumana iimbasa kunye newonga kwimbali yawo yonke kuwo onke amanqanaba emisitho equka imisitho ephezulu yamanqindi yamazwe ngamazwe efana ne-AIBA Men's World Boxing Championships, i-AIBA Women's World Boxing Championships, Imidlalo yaseAsia kunye ne-ASBC Asian Boxing. Ubuntshatsheli. Eli lizwe linesithethe esikhulu somdlalo wamanqindi kwaye i-AIBA iya kuyixhasa kuwo onke amanyathelo, uMongameli Kremlev wongeza.
12 EyeNkanga 2021
I-AIBA ikhuthaza amathuba alinganayo kuMnyhadala weBhokisi weHlabathi waMadoda
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, ithuba elilinganayo	0
I-AIBA ibonise ukuzibophelela kwayo kumathuba alinganayo ngokubonelela ngenkxaso kwiMibutho yeManqindi yeSizwe eli-18, kunye neQela leQela lokuqala eliFanelekileyo, ngexesha loBuntshatsheli beHlabathi baManqindi eBelgrade.
I-2021 ye-AIBA Men's World Championship Championship, egqitywe ngomhla wesi-6 kweyeNkanga eBelgrade, eSerbia, ibonise ama-88 eMibutho yamaLungu e-AIBA. Abaphumeleleyo kudidi ngalunye kwiiklasi zobunzima ezili-13 baxhamle kwibhaso lemali elingazange libonwe ngaphambili, nabafumene imbasa yegolide befumana i-100 000 yeedola lilinye, ukongeza kwiimbasa zegolide eziluqilima kunye namabhanti eentshatsheli.
Ekwakhiweni kunye nangexesha lomcimbi, i-AIBA ixhase i-National Boxing Federations evela kula mazwe alandelayo: iCameroon, iColombia, iDominican Republic, i-Ecuador, iGeorgia, iGuatemala, iGuyana, iHaiti, iNepal, iNicaragua, iPalestine, iPuerto Rico, iTanzania, eBahamas, eTrinidad naseTobago, eSeychelles, eSierra Leone naseVenezuela. Inkxaso iquke ukuhlawulela iindleko zokuhamba nezokuhlala kumalungu amaqela. Uncedo olufanayo lunikwe neFair Chance Team, nejolise ekuxhaseni iimbethi manqindi ezinokuthi azikho kumazwe azo okanye ezingakwaziyo ukumela loo mazwe ngenxa yezizathu zobuntu.
Iimbasa ezine zacholwa ngamazwe afumene inkxaso ye-AIBA. USakhi Alakhverdovi noLasha Guruli baseGeorgia, u-Alexy De La Cruz Baez waseDominican Republic kunye noPaul Nigel waseTrinidad naseTobago bonke baphumelele iimbasa zobhedu.
“Ndinikezela le mbasa kuMongameli we-AIBA uMnu Umar Kremlev osoloko exhasa iDominican Republic Boxing Federation, evumela ukuba senze umsebenzi wethu,” utshilo owafumana imbasa yobhedu u-Alexy De La Cruz Baez. “Siyabulela kuye nangoncedo lwakhe, sikwazile ukuyiphumelela le mbasa. Ngaphandle koncedo lwakhe ngekwakungenakwenzeka. Ndinikezela ngembasa yobhedu kuwe, Mongameli.
11 EyeNkanga 2021
UbuNtshatsheli beHlabathi baManqindi be-AIBA buhlehliselwe uMatshi ka-2022
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Ubuntshatsheli beBhola eKhatywayo yeHlabathi yaBasetyhini	0
I-AIBA Women’s World Boxing Championships bekufanele ukuba ibanjelwe e-Istanbul, eTurkey, ecwangciselwe ukusuka ngomhla we-6 ukuya kowe-19 kaDisemba ka-2021.
Ngelixa i-AIBA ibisebenza nzima ukugcina ishedyuli yesi siganeko, impendulo efunyenweyo kukuba uninzi lweeManyano lweSizwe lujongene neemeko ezinzima kunye nezithintelo kumazwe abo.
Ngenxa yale Bhodi ye-AIBA yaBalawuli kwimvumelwano i-Turkish National Federation igqibe ekubeni ihlehlise uBuntshatsheli beHlabathi yabaseTyhini ukuya kuMatshi ka-2022.
'Siyazi ukuba amanye amaqela sele eqalile amalungiselelo alo msitho kwaye azakudana. Nangona kunjalo, ukhuseleko kunye nokuphila kakuhle kweembaleki zethu, amagosa kunye nabanye abachaphazelekayo yinto ephambili, kwaye ke ngoko asinakuthatha umngcipheko wokuqhubeka nomsitho', utshilo uMongameli we-AIBA u-Umar Kremlev.
10 EyeNkanga 2021
Owesi-6 kaDon Jose Sulaiman iWBC iKhathalela uMceli mngeni weBhokisi yeManqindi eyimpumelelo
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	Umngeni woMdlalo wamanqindi, UDon Jose Sulaiman WBC Uyakhathala, Ukukhathalelwa kweWBC	0
Umngeni woNyaka we-6 kaDon Jose Sulaiman weWBC Cares Amateur Boxing Challenge yayingumsitho omnandi, kukho amabhinqa angama-48 namadoda akhuphisanayo. Ilifa elibuhlungu likaDon Jose lifaneleka kwaye lixhamle umdlalo wabo, linceda ukukhokela ikamva labadlali bethu bamanqindi abalandelayo.
Emva kokuba begqibe ukuba babe nethuba lokungqina uSaul “Canelo” Alvarez eba yiNtshatsheli yeSuper Middleweight engenakuphikiswa,
Enkosi ngokubona kwangaphambili, imbono, ukuzinikela kunye nobulumko bukaDon Jose, ezi zinto zinokwenzeka. Zaza izandla zabaphumeleleyo ziphakanyiselwe esibhakabhakeni.
I-WBC ibulela i-Hit Squad ngokubamba lo mboniso.
6 EyeNkanga 2021
Aba-6 abafikelele kumagqibela kankqoyi benze ubunzima bomdlalo wamagqibela kankqoyi we-AIBA World Boxing Championships
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Aliaksei Alfiorau, UAndy Cruz Gomez, UAziz Abbes Mouhiidine, UJahmal Harvey, UJulio La Cruz Peraza, Kerem Oezmen, URobby Gonzales, Induli yaseRoscoe, Kuthathwe iBibossinov, USerik Temirzhanov, Vadim Musaev, Yurii Zakharieiev	0
Abaphumeleleyo kumabakala ama-6 obunzima bazakukhuphisana namhlanje ukufumana iimbasa zegolide kwi-AIBA Men's World Boxing Championships eBelgrade, eSerbia. Bonke abathathi-nxaxheba benze ubunzima babo.
I-Roscoe Hill (e-USA) - 50,8kg
USerik Temirzhanov (KAZ) - 56, 8 kg
Kerem Oezmen (TUR) - 62,3 kg
UAndy Cruz Gomez (UZB) - 63,1 kg
UVadim Musaev (RBF) - 70,7 kg
UJulio La Cruz Peraza (CUB) - 91,2 kg
U-Aziz Abbes Mouhiidine (ITA) - 91,4 kg
2 EyeNkanga 2021
Izihloko ezisi-7 zeWest Ham kunye neNewham kwi-England Boxing National Jnr Championships
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	ENgilani kumdlalo wamanqindi, UBuntshatsheli beSizwe babaNtwana	0
Iiklabhu zaseLondon iWest Ham kunye neNewham nganye ikhusele izihloko ezisixhenxe ezibalaseleyo
uhlelo olukhulu lweeNtshatsheli zeBhokisi zeSizwe zaseNgilani zowama-2021.
Ngobhubhani we-Covid-19 unyanzelisa yonke iminyhadala yelizwe ukuba icwangciswe kumdlalo wokugqibela
kwiinyanga ezine zonyaka, kwakhuphisana imbethi manqindi yeJunior Development Class A neClass B
ecaleni kweCadet kunye neJunior Open abalingane babo - endaweni yokuba bazimele
isiganeko - kumboniso omnye omkhulu.
Kwaye yayilithuba leembethi manqindi zekomkhulu zavuka kwisitayile ngeeHooks zePowerday
(abaphumeleleyo ababini), iRainham, iBodyshots kunye noFinchley nabo banandipha impumelelo, kwi
Ukongeza kwi-East End duo.
Kodwa zininzi iimpumelelo zeembethi manqindi eziphuma kuzo zone iimbombo zelizwe, nazo,
neembethi manqindi eziphuma kumaqela angekho ngaphantsi kwamashumi amathandathu anesihlanu ezibanga iimbasa zelizwe kwenye kwezine
Oko kuquka impumelelo kuyo yonke imimandla ye-England Boxing's 11, ukusuka
Abavukuzi baseCambois kuMntla Mpuma, ukuya kwiRingi yeGolide, eSouthampton eMzantsi
Impumelelo yeWest Ham yayahluke kakhulu kwiiNtshatsheli zeZikolo
NgoSeptemba xa babeneqela labaphumeleleyo, kodwa abazange babhalise namnye
Ngeli xesha kwakukho izizathu ezininzi zokubhiyozela kwimpelaveki ebalaseleyo yeklabhu
njengoFrank Middleton, uJoshua Jarvis, uHarry Penny, uLuka Rodda, uCharlie Brown, uRiley
UMurray kunye no-Anthony Connors bonke balugqibile uSuku lokuGqibela njengenombolo yokuqala kwilizwe.
I-Newham, okwangoku, iqinisekise ukuba iphelile impelaveki njengeyona ndawo iphumeleleyo
iklabhu, kunye no-Arthur Mattock, uJimmy Doherty, uEmmanuel Buttigieg, uPaddy Rooney, uJoby
USmith, uMatty Attrell kunye noCharlie Cooper bonke baphumelele.
“Eyona nto ibindivuyisa kakhulu kukuba uninzi lwabo baphumelele iZikolo zaseYurophu
izihloko bebelapha bekhuphisana kwesi siganeko, oku kuthetha ukuba baqhubekile kwaye
yenze ngempumelelo inguqu ukuya kwiqela leminyaka ephezulu,” utshilo i-England Boxing’s
Umqeqeshi woPhuhliso, uAmanda Coulson.
“Okwakuvuyisa ukubona ezi mbethi manqindi zityhilwa ngamandla –
kwezinye iimeko zibethwe – zezinye imbethi manqindi eziphuhlise isakhono sazo ngethuba
ukhuphiswano lwexesha luvaliwe yi-Covid-19.
“Ngoku sinesakhono esingundoqo kwiimbethi manqindi zeJunior kwaye kuyakuthakazelisa ukubabona
baqhube njani phambili kwakhona ngexesha elilandelayo le-England Boxing National Junior
Ukhuphiswano lobuntshatsheli luza ngoMatshi oluya kuthi, iCovid-19 ivumeleke, isincede sikhethe a
Iqela le-Junior European Championships ngo-2022.”
Iintshatsheli zeKlasi evulekileyo zavuzwa ngebhanti lobuntshatsheli, ngelixa iiCadets kunye
Iimbethi manqindi zodidi A nodidi B ziphumelele imbasa yegolide.
Amagqibela kankqoyi kuzo zonke iiklasi athabathe iimedali zesilivere kwaye alahlekelwe yimidlalo yokugqibela yabhedu
iimbasa, ngelixa zonke iimbethi manqindi zifumene isatifikethi somdlalo wamanqindi eNgilane
Abo baphumelele izihloko zeKlasi eVulekileyo ngoku bayamenywa ukuba baziqeqeshe neNgilane
Abaqeqeshi beetalente kwiJunior Champions Day ngoMgqibelo we-13 ngoNovemba (amakhwenkwe) kunye
NgeCawa 14 th Novemba (amantombazana).
Iimbethi manqindi ezingoomama zetonamenti, njengoko zikhethwe liqela elibukele iNgilane
Abaqeqeshi beetalente, babe nguFay Brown (iKlasi yoPhuhliso A, iCambois Miners, phantsi
46kg), uGabby Strange (uPhuhliso lweKlasi B, Wimborne, ngaphantsi kwe-70kg), uNancy
Umalusi (iKhadethi, iiGloves zaseKent, ngaphantsi kwe-54kg) kunye no-Emily Whitworth (iKlasi eVulekileyo, iThe
Ijim yabantu, ngaphantsi kwe-54kg).
Iimbethi manqindi ezingamadoda zetumente ibinguJayden Hook (Udidi loPhuhliso A, Billericay,
Ngaphantsi kwe-54kg), uHarvey Orriss (iKlasi yoPhuhliso B, iGuildford, ngaphantsi kwe-60kg), eLouis
I-Szeto (i-Cadet, i-Gemini, ngaphantsi kwe-46kg) kunye ne-Leighton Birchall (iKlasi evulekileyo, i-Sharpstyle,
Ukhuphiswano lwabasetyhini lwetumente yayingu-Abby Briggs (Hunslet) v Madison Adkins
(Bodyshots Redditch) kudidi Open Class, lo gama ukubetha oyindoda ye
Itumente yayiyiDenaeo George (IsiXeko saseLeicester) v John Varey (Sharpstyle), naye
Ukufumana uluhlu olupheleleyo lweentshatsheli zelizwe, jonga uluhlu olupheleleyo lweziphumo ngezantsi.
Iziphumo ezigqibeleleyo zoSuku lokuGqibela
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-42kg – uTyler McIntyre (JC's) wabetha uZerrel Gordon
(Guildford) ngesigqibo esinye.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-46kg - uFay Brown (Cambois Miners) ubetha
U-Abigail Ingram (Uvuthuza) ngesigqibo esivumelanayo.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-46kg – uNiall Tee (Far Cotton) wabetha uHadley
IBinskin (PEJ) ngesigqibo esivumelanayo.
IKlasi yoPhuhliso lwabasetyhini A, ngaphantsi kwe-63kg - Ukutsalwa kweTallulah (Umkhondo kunye nokomelela)
ubethe uSandra Piekarska (kaMikey) ngesigqibo esimxhelo mnye.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-40kg – uLiam Warren (u-Acocks Green) wabetha u-Alfie
Collard (Hastings) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-50kg – uPatrick Connors (iSporting Ring) wabetha uJoe
Turner (Halifax) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-54kg - uJayden Hook (Billericay) wabetha uAnton
Taylor-Dalmeida (Belvedere) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-70kg - u-Erin Walker (kuMzantsi Normanton) ubethe
Jamyleigh Pettinger (Mick Wale) ngesigqibo esivumelanayo.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, Ngaphezu kwe-80kg – u-Arthur Mattock (eNewham) wabetha uLleyton
Kirman (St Paul's) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-46kg - u-Luke Quinlan (iqela le-Greaves) wabetha uFelix
Fitzharris (Repton) nge-walkover.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-54kg – uLewis Guy (Cambois Miners) wabetha uCarlos
Denith (Stockbridge) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-60kg - uHarvey Orriss (Guildford) wabetha uJohn Price
(Sula) ngesigqibo esinye.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, Ngaphezu kwe-80kg - uGideon Anaba (iDoncaster Plant) wabetha uJon
UTom Kerry (eThetford) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-70kg – uGabby Strange (Wimborne) wabetha uEmily
Newbury (Hartlepool Catholic) yiRSC.
Abafana abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-44kg - uJoey Saunders (Pinewood) wabetha uMartin Rooney
(Repton) ngesigqibo esahlukileyo.
Abasetyhini abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-52g - uYasmin Sutin (Rumbles) wabetha uRuby Atkinson
(Birtley) ngesigqibo esahlukileyo.
Amadoda angaphantsi kwama-52kg - uShae Gowler (wamapolisa asePeterborough) wabetha uJohn
UWilson (Phil Thomas) ngesigqibo esahlukileyo.
Amadoda akwi-Junior Cadets, angaphantsi kwe-57kg - i-Callum Seedhouse (eGreat Wyrley) ibethe uZayn
Sadiq (Pinewood) ngesigqibo esinye.
Amadoda angaphantsi kwe-63kg - uNathan Barrett (Powerday Hooks) wabetha uRyan
eSkotlani (eWodensborough) ngesigqibo esinye.
Amadoda angaphantsi kwe-80kg - uConnor McCormack (Chichester) wabetha u-Alfie Baker
(Amapolisa asePeterborough) ngesigqibo esinye.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-42kg - uJohn Tom Varey (iBhokisi Smart Elite) wabetha uJoe Padget
(Sunderland) ngesigqibo esinye.
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-48kg - uFrances Coope (2nd City) ubethe uScarlett McAllen (Omtsha
Kings) ngesigqibo esahlukileyo.
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-50kg - u-Ebony Jones (Scunthorpe) wabetha uDionne Mannion
(Marden) ngesigqibo esahlukileyo.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-50kg - uCain Alexander (Rotunda) wabetha uLeo Wood (Guildford) ngo
Indoda encinci, engaphantsi kwe-54kg - uJimmy Doherty (Newham) wabetha uJoseph Young (Purge) ngo
Isigqibo ngamxhelo mnye.
Owasetyhini Junior, Under 60kg – Gracie Holland (Priory Park) wabetha Madelaine Wright
(Blake) ngesigqibo esinye.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-63kg - uDan Kerrigan (Ibhokisi le-Smart Elite) wabetha uAaron Bird
(Olympian) ngesigqibo esahlukileyo.
Male Junior, Under 66kg – Ellis Panter (Burton Park) wabetha Tyrone Cross (Westree)
Indoda encinci, engaphantsi kwe-70kg - u-Emmanuel Buttigieg (Newham) ubethe uRoger Draper
(Pinewood) ngesigqibo esifanayo.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, abangaphantsi kwe-42kg - uMillie Shorts (Priory Park) wabetha u-Emily
Anderson (Peterborough Police) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-48kg – uMillie Firfax (Titans) ubethe i-Beth Moon
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-52kg - uRuth Huntley (Rainham) wabetha uSarah-
Jane Sadler (Brooklands) ngesigqibo esimxhelo mnye.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-57kg - uLeah Thakur (ilizwe eliMnyama) ubethe
UMaisa Rahim (eStratford Phezu kweAvon) yiRSC.
IKlasi yoPhuhliso lwaMadoda, engaphantsi kwe-52kg - uMelad Aziz (iBodyshots) wabetha uDonovan
Ahearn (Hodbox) ngesigqibo esahlulahlulwe.
IKlasi yoPhuhliso lwaMadoda, engaphantsi kwe-57kg - Mohamed Dergoul (I-Powerday Hooks)
wabetha uPatrick Nevin (iKing's Heath) ngesigqibo esahlukileyo.
IKlasi A yoPhuhliso lwaMadoda, engaphantsi kwe-63kg – uTeddy Cerda (okaSmokey) wabetha uLewis
Robinson (Gemini) ngesigqibo esahlukileyo.
Iklasi yoPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-66kg - uReece Baker (iPhoenix Fire) wabetha uHarry
Huntley (Hartlepool Catholic) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-70kg - uPaddy Rooney (eNewham) ubethe i-Aeron
McDonald (Aston) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-48kg - uLeon Burns (Birkenhead Venture) ubetha
Jayden Salkey (Iiglavu zeLucky) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-66kg - uHarry Homer (wesiXeko sesibini) wabetha u-Alfie Tilson
(Hockley) ngesigqibo esinye.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-70kg – uJames Dean Fury (M31 Boxing) ubethwe
UDennis Whittington (Moulescoomb) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-75kg - uHarry Loughlin (Kenton) wabetha u-Osmaan
Sharifi (Leicester Lightning) yi-RSC.
Amadoda angaphantsi kwama-46kg - uLouis Szeto (Gemini) wabetha uMuhammad Al Harbi
(Hi-Tech) ngesigqibo esinye.
Amadoda angaphantsi kwama-48kg - uZayn Ahmed (Pinewood) wabetha uRoman Singh
Digwa (Moss Side Fire) ngesigqibo esivumelanayo.
Amadoda angaphantsi kwama-38kg - uTony Curtis (Rumbles) wabetha u-Andrew Walsh
Abasetyhini abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-54kg - uNancy Shepherd (iGloves zaseKent) wabetha uKiera
Bowden (Redcar) ngesigqibo esinye.
Amadoda angaphantsi kwe-60kg - uFrank Middleton (West Ham) wabetha uSam Hardy
(Newark) ngesigqibo esinye.
Amadoda aPhantsi kwe-70kg – uJoe Cooper (Pinewood) wabetha uTommy Dolan
(Barton Hill) yi-RSC.
Owasetyhini Junior, Under 46kg – Anya Wilson (Blue Flames) wabetha Donna Marie Cawley
(Gladiators) ngesigqibo esivumelanayo.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-48kg - uJoshua Jarvis (West Ham) wabetha uMike Tallon (Lee Jones)
Indoda encinci, engaphantsi kwe-52kg - uRecardo Jenkins (Kirkby) wabetha uBrad Archbold
(Wearmouth) ngesigqibo esinye.
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-57kg - uPaige Howarth (Clayton) wabetha u-Olivia Williams (uTommy
Coyle) ngesigqibo esifanayo.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-57kg - uThomas Varey (Sharpstyle) ubethe uChase Loveridge
Owasetyhini Junior, Under 63kg – Macey Gardner (Arena) wabetha Mia Horsley (Atherstone)
ukubetha ngesigqibo esahlukileyo.
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-75kg-Amber Moss-Birch (Golden Ring) wabetha uLily Deacon
(Hunslet) ngesigqibo esinye.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-80kg - u-Ethan Moore (Downend) wabetha uJoe Hodgkinson
Indoda encinci, engaphezulu kwe-80kg - uDempsey McManus (Wodensborough) wabetha uJack
Blencowe (Kingfisher) ngesigqibo esahlukileyo.
Iklasi yoPhuhliso lwaMadoda, Ngaphantsi kwe-44kg - u-Eishay Parmer (i-Leicester Lightning) ibetha
ITheo Towns (Kenton) ngesigqibo esinye.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-60kg - uHarry Burke (iSango) wabetha uJimmy
Sheridan (Newham) ngesigqibo esahlukileyo.
Iklasi yoPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-48kg - uMallacki McHale (Middlesbrough) ubetha
UBilly Macey (West Ham) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-54kg - u-Evie Smith (FKB) wabetha uRihanna Begley
(Akukho Mida) ngesigqibo esinye.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-75kg – uJohnny Butcher (Izitali) ubethe iChrissace
Mendez (Gladiators) ngesigqibo esivumelanayo.
Udidi A loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-80kg – uTom Crust (eBeartown) wabetha uHarry
Crawford (Maldon) ngesigqibo esivumelanayo.
Udidi A loPhuhliso lwabasetyhini, abangaphantsi kwe-80kg - uCharntau Naido (New Saints) ubethe
I-Shakira Purchase (i-Blue Flames) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-50kg - uJoby Smith (eNewham) wabetha uAneeq Ghani
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-52kg - uMatty Attrell (Newham) wabetha u-Ahmed
Mohamoud (Engoyiki) ngesigqibo esimxhelo mnye.
Udidi B loPhuhliso lwabasetyhini, ngaphantsi kwe-54kg - Abathengisi baka-Olivia (Bolsover) babetha uSophie
I-Atlass (Wirral CP) ngesigqibo esivumelanayo.
Iklasi yoPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-57kg - i-Harvey Speight (Umqolomba woQeqesho) ubetha
Jacore Collins-Austin (Blackbird Leys) ngesigqibo esivumelanayo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-63kg – uKian Dixon (Shildon) wabetha uAnthony
McDonagh (West Ham) ngesigqibo esahlukileyo.
Udidi B loPhuhliso lwaMadoda, ngaphantsi kwe-80kg – uZeph Buxton (Finchley) wabetha uNapoleon
I-Spahiu (i-Counties yaseMzantsi) ngesigqibo esahlukileyo.
Abasetyhini abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-40kg - uDarcie Rae (iPlains Farm) wabetha u-Ellie-May
Chapman (Hunslet) ngesigqibo esinye.
Abasetyhini abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-42kg - u-Ellie Traynor (Seacroft) wabetha u-Ella Hale
(Smallholdings) ngesigqibo esinye.
Abafana abancinci abangamadoda, abangaphantsi kwe-42kg - uHarry Penny (West Ham) ubethe uYusuf Uddin
(Ngokungenaloyiko) ngesigqibo esahlukileyo.
Abafana abancinci abangamadoda, abangaphantsi kwe-50kg - uMusa Sheikh (Fairbairn) wabetha uDean Peet
(Rotunda) ngesigqibo esinye.
Amadoda aPhantsi kwe54kg – uLuke Rodda (West Ham) wabetha uLewis Haury (JC's)
Abasetyhini abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-57kg - uZaynah Casserly (Aston) wabetha u-Allana Shaw
(Littleborough) ngesigqibo esinye.
Abasetyhini abancinci abancinci, abangaphantsi kwe-63kg - uTiah Ayton (Barton Hill) wabetha uMonae Smith
(MTK Amateurs) ngesigqibo seRSC.
Amadoda angaphantsi kwama-66kg - uCharlie Brown (West Ham) wabetha uAshton Duncan
(iThames Valley) ngesigqibo esinye.
Amadoda angaphantsi kwama-75kg - uCharlie Cooper (Newham) wabetha uBernie McDonagh
(Ardwick Lads) ngesigqibo esahlukileyo.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-40kg - uRiley Murray (West Ham) ubethe uLuqman Siddique (Yinyani
BC) ngesigqibo esinye.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-44kg - uLewis Cocksey (okaJimmy Egan) ubethe uAlbert Collins
(Scunthorpe) ngesigqibo esivumelanayo.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-46kg - uLeighton Birchall (Sharpstyle) ubethe uDanish Ahmed (Yinyani
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-52kg - uLaylie Heath (Sunderland) wabetha uJessica Keeton
(Scunthorpe) ngesigqibo esahlukileyo.
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-54kg - u-Emily Whitworth (iGym yabantu) wabetha uLauren Mackie
(Burton Park) ngesigqibo esahlukileyo.
Owasetyhini omncinci, ongaphantsi kwe-70kg - uMadison Adkins (iBodyshots Redditch) wabetha uAbby
Briggs (Hunslet) ngesigqibo esahlukileyo.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-60kg - uBilly Cooper (Chadwell St Mary) ubethe uGeorge Peacock
(Barnard Castle) ngesigqibo esinye.
Indoda encinci, engaphantsi kwe-75kg - u-Anthony Connors (West Ham) wabetha uDerelle McKenzie
(IHolo eluhlaza) ngesigqibo esivumelanayo.
29 EyeDwarha 2021
UJahmal Harvey woyise i-AIBA World Champion elawulayo (kubunzima bosiba)
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Harvey vs. Mirzakhalilov, UJahmal Harvey, Mirazizbek Mirzakhalilov	0
Jahmal Harvey vs. Mirazizbek Mirzakhalilov
Belgrade, eSerbia 29/10/21
Ithemba elikwishumi elivisayo lase-United States u-Jahmal Harvey wenze umdlalo ongathandekiyo kwiseshoni yasemva kwemini yosuku lwesine kuBuntshatsheli be-AIBA beBoxing eBelgrade, eSerbia. UHarvey ukhuphe i-Uzbekistan eyiNtshatsheli yeHlabathi ye-AIBA uMirazizbek Mirzakhalilov ukuze afikelele kumdlalo wokugqibela we-1/8.
UHarvey uza kuba neminyaka eli-19 kamva kulo nyaka, kodwa imbethi manqindi yase-US yangqina ukuba unetalente entle kumanqindi. Uye wafumana ubunzima kumjikelo wokuqala kumlo wakhe wokuqala, kodwa wakwazi ukubetha uVasile Usturoi waseBelgium kumlo onzima. Umqeqeshi wase-Ireland kaHarvey uBilly Walsh ulungiselele isicwangciso sokhuphiswano lwakhe lwesibini ngokumelene noMirzakhalilov, ophethe i-AIBA World Champion kunye ne-Asian Games.
Imbethi manqindi yase-Uzbek yenye yeenkwekhwezi eziphambili kwi-AIBA World Boxing Championships. kodwa imbangi yakhe yase-US yamothusa ngokubetha kwakhe ngenqindi okusebenzayo kunye nenqanaba eliphezulu lomsebenzi weenyawo. UHarvey ugqithe konke ebekulindelekile kulo mlo wobunzima bosiba (57kg) waze wayisusa intshinga ebikhuselayo.
“Bendikholelwa kum, kwizakhono zam nakubaqeqeshi bam namhlanje,” utshilo uHarvey, “kwaye bendisazi ukuba ndingaphumelela. Umjikelo wokuqala wawubaluleke kakhulu, kwaye ndanikela kuyo yonke into ukuba ndikhokele kumakhadi amanqaku ukuze ndilandele iqhinga lam. Ndinemeko yomzimba yokugcina kwinqanaba elifanayo kude kube sekupheleni. Umoya uncomeka kakhulu kwesi siganeko, kwaye ndiyavuya kuba loo nxalenye yaso.”
27 EyeDwarha 2021
UHayato Tsutsumi waseJapan woyisa intshatsheli yamaxesha amathathu uLazaro Alvarez
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Hayato Tsutsumi, ULazaro Alvarez, Iimbaleki yamanqindi yehlabathi yamadoda, Tsutsumi vs. Alvarez	0
Iseshoni yangokuhlwa yosuku lwe-3 yokhuphiswano kwi-AIBA Men's World Boxing Championships yabona izenzo ze-16 yokugqibela kubunzima obuncinci (48kg) apho ama-Asiya abonise ukusebenza okuqinileyo. Umjikelo wama-64 nawo wabanjwa kubunzima obulula (60kg); Intshatsheli yeHlabathi yoLutsha ye-AIBA yaseJapan ka-2016 ethembisa uHayato Tsutsumi yasusa inkwenkwezi yaseCuba, intshatsheli yamaxesha amathathu uLazaro Alvarez ngokusebenza okumangalisayo.
U-Omer Ametovic oneminyaka eli-19 ubudala waseSerbia wabetha amanqindi ngaphezulu kwinqanaba lakhe langaphambili kwaye wayonwabile iŠtark Arena.
U-Omer Ametovic waseSerbia ufumene iimbasa ezimbini ngexesha lomsebenzi wakhe kwi-EUBC Youth Boxing Championships yaseYurophu. Le mbethi-manqindi yasekuhlaleni eneminyaka elishumi elinesithoba yazilungiselela ngokuzimisela lo msitho apho inokuthi ibeke amanqindi phambi kosapho lwayo. Umfana waseSerbia uqale umjikelo wokuqala kwi-19 yokugqibela kwisigqi esiphakamileyo ngokuchasene noMuhammet Unlu waseTurkey obuyele kwiqela lesizwe emva kweminyaka emine yekhefu. U-Ametovic mncinci kuninzi lwabachasi bakhe kodwa indlela yakhe yokudlala amanqindi ayikhululekanga kwiimbethi manqindi kwaye u-Unlu naye akakwazanga ukugcina uluhlu olude. I-Serbian ekhawulezayo yasebenza nzima yonke imijikelezo emithathu kwaye wanika konke ukuphumelela ukhuphiswano lwakhe lweemvakalelo.
UWuttichai Yurachai ubuyile ngomsebenzi ophezulu
I-Thailand Boxing Federation yathumela iqela elinamandla kodwa liselula kakhulu kwi-AIBA World Boxing Championships. Ilungu labo leqela elidala nguWuttichai Yurachai obuyele kwimicimbi yamazwe ngamazwe emva kweminyaka emibini yekhefu. Uphumelele iNdebe yeHlabathi yeBhokisi yeCologne eJamani ngo-Epreli ka-2019 kodwa khange akwazi ukukhuphisana naphina ngenxa yobhubhane kunye nokuvalwa. U-Yurachai oneminyaka engama-29 ubudala wazilolonga kwaye iziphumo zomsebenzi wakhe zaba yimpumelelo ecacileyo kuJakub Slominski wasePoland kumjikelo wokuqala wodidi oluphantsi (48kg). I-Thai yaqhubela phambili kwizakhono zokuzikhusela kunye nobuchule, ngoko ke, imbethi manqindi yasePoland ayizange ikwazi ukuyibamba kumdlalo.
UVsevolod Shumkov woyisa imbangi yakhe yase-US kumlo onzima
IQela le-RBF uVsevolod Shumkov ngumdlali oneminyaka engama-20 ubudala ophumelele imbasa yesilivere kwiBudapest 2018 AIBA Youth World Boxing Championships kwaye emva kokungena kwakhe kwiqela le-elite age, uye wabanga iwonga lakhe lokuqala lesizwe kwinyanga ephelileyo. UmRashiya wadibana nomdlali osemncinci wase-US, uJonathan Mansour owayenokufikelela ixesha elide kunye nenzuzo yokuphakama. Iintshukumo zikaShumkov bezigqwesile kumjikelo wokuqala, waziva umgama kwaye wafumana amanqindi ambalwa asebenzayo amnike inzuzo. UShumkov wayenamagwegwe agqwesileyo kumjikelo wesibini kodwa uMansour wabuyela kumdlalo ngelo xesha esebenza ngamandla. Isigwebo sokugqibela besixhomekeke kwindlela abaqhube ngayo kumjikelo wokugqibela xa uShumkov ebejongeka ngcono waze waphumelela umlo wabo we-lightweight (60kg).
UViliam Tanko waseSlovakia woyisa imbangi yakhe yaseMauritius ngokuzithemba
UViliam Tanko waseSlovakia uneminyaka eli-10 yamava kukhuphiswano lwamazwe ngamazwe, waya kuKhuphiswano lwe-AIBA Junior World Boxing Championships ngo-2011 eKazakhstan. Lo mdlali waseSlovakia ubuyele kudidi lwakhe olungcono, olulula (60kg) kwaye uwuvile umgama ukusuka kwimizuzwana yokuqala xa edibene nentshatsheli yaseMauritius uJean Agathe ophumelele iminyhadala yesizwe kuphela kwiminyaka edlulileyo. Umdlali waseSlovakia wahlasela imbethi manqindi yaseMauritiya ngokufanelekileyo kwaye emva kokudlala kwakhe, unokulungiselela inqanaba elilandelayo ngoLwesihlanu.
UHayato Tsutsumi waseJapan wamshenxisa uLazaro Alvarez kumlo obalulekileyo
UHayato Tsutsumi waseJapan ufumene imbasa yegolide kwi-2016 AIBA Youth World Boxing Championships kwaye uphumelele i-ASBC Asian Youth Boxing Championship kabini. I-Japan eneminyaka engama-22 ubudala yayine-draw enzima, kwafuneka idibane kumjikelo we-64 kunye ne-Cuba ye-AIBA World Champion kathathu uLazaro Alvarez. U-Hayato, umninawa wakhe u-Reito ukwalilungu leqela lesizwe e-Belgrade, wafumana isingqisho sakhe esihle ekuqaleni komjikelo wesibini emva kokulingana kuqala. Italente yaseJapan yaphakamisa ubushushu kwaye yabamba uAlvarez ngeempumlo ezinzima ukusuka kuluhlu olusondeleyo, ngoko ke, iCuban yaphulukana nesigqi sakhe. UHayato Tsutsumi ufumene inani eliphezulu lamahuka kumjikelo wesithathu ngokuchasene nenkwenkwezi yaseCuba kwaye wasusa omnye wabo babekhuphisana nembasa yegolide eBelgrade.
25 EyeDwarha 2021
I-AIBA ibhiyozela ukuvulwa koBuntshatsheli beHlabathi baManqindi baMadoda
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Iimbaleki yamanqindi yehlabathi yamadoda	0
I-AIBA Men's World Boxing Championships yaphawula ukubuyela kwayo eBelgrade okokuqala ukusukela ngo-1978 ngokwesitayile, ngoMsitho wokuVula owawubonisa ukuhlangana kwembali etyebileyo yamanqindi kunye nokuphuculwa kwezemidlalo phantsi kobunkokeli bayo obutsha.
Ukusukela ngomhla wama-24 kuOkthobha ukuya kowe-6 kuNovemba, ziimbaleki ezingaphezulu kwama-500 eziphuma kumazwe angaphezu kwama-88 eziza kukhuphisana kwiindidi zobunzima ezili-13 – ezona zininzi kwimbali yalo mnyhadala. UMsitho wokuVula umisele iqonga leeveki ezimbini ezikhumbulekayo zentshukumo, eziya kuthi zibonise iimbaleki ezithile njengenxalenye yeQela leThuba eliFanelekileyo. Yenzelwe iimbaleki eziye zaziva zinyanzelekile ukuba ziwashiye amazwe azo, ngokufuthi ngenxa yongquzulwano. Okokuqala kukhuphiswano lwe-AIBA, iqela lihambe ecaleni kwamazwe akhuphisanayo njengenxalenye yomngcelele weembaleki.
Ngexesha lomsitho ababukeli bathathwe kuhambo olutsala umdla lwembali yamanqindi, becacisa indlela uphuhliso lwangaphambili olwathi lwabeka ngayo iziseko zalo mdlalo ngendlela yawo yale mihla. Iphinde yabhala ngokusungulwa kweVal Barker Trophy, eyaziswa ukuhlonipha i-19th Intshatsheli yobunzima bobunzima benkulungwane eyathi kamva yaba ngumntu ophambili kuhlumo lwehlabathi lwamanqindi. Ngelixa i-AIBA izama ukuguqula ezemidlalo kwaye iqinisekise ukuba i-AIBA ngumbutho ovulelekileyo, ongenamkhethe noselubala nosebenza njengekhaya elamkela zonke iimbethi manqindi, ibekwe yacaca into yokuba inkqubo yohlengahlengiso izakubandakanya imiba exabisekileyo yembethi manqindi, eyenze ukuba kube njalo. amandla amanyanisayo ehlabathini lonke.
Ethetha kuMthendeleko wokuvula, uMongameli we-AIBA u-Umar Kremlev uthe: “Obu khuphiswano bukhethekileyo ngeendlela ezininzi. Ngaphandle kwayo yonke into esiye sadlula kuyo umntu ngamnye kwaye ngokudibeneyo, somelele kunangaphambili. Siyawabona la mandla kwimali yebhaso kunye neembasa ezilindele abona bangcono phakathi kwenu. Siyawabona la mandla kuphuculo esilwenzile kwi-AIBA. "
“Kwakunye nokomelela, uluntu lwethu ngoku lunobulungisa ngenxa yeenzame ezinkulu esizenzileyo zokuqinisekisa ukuba nonke ninokuqiniseka ngemilo enobulungisa. I-AIBA iyawubulela wonke umsebenzi onzima owenziweyo ukuze kwenzeke lo mzuzu. "
Kwakukho neentetho ezivela kuMongameli we-Serbian Boxing Federation uNenad Borovčanin, uMphathiswa woLutsha kunye neMidlalo yaseSerbia uVanja Udovičić, unozakuzaku we-AIBA kunye nentsomi yamanqindi uRoy Jones Jr, kunye nabanye ooNozakuzaku be-AIBA abaliqela. Ubusuku bonke uchungechunge lwemisebenzi yobugcisa lukhanyise i-Štark Arena, ngoku ilungele ukuva intsimbi yokuvula kusasa.
I-AIBA yoKhuphiswano lweManqindi yeHlabathi yaMadoda: Iziphumo ezisemthethweni zokuzoba
UMzobo osemthethweni woBuntshatsheli beHlabathi baManqindi baMadoda be-AIBA uthathe inxaxheba eBelgrade, eSerbia. Isiganeko siqala namhlanje ngoMthetho oMkhulu wokuVula kwi-Štark Arena.
Ungazifumana zonke iinkcukacha ezingezantsi:
IShedyuli yoKhuphiswano oluneenkcukacha
Inani lamangenelo yiNOC
Uluhlu lokungeniswa nguNOC
Ishedyuli yeseshoni 1A/1B (25 Okthobha)
19 EyeDwarha 2021
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Iibhanti, Iindondo, Iimbaleki yamanqindi yehlabathi yamadoda	0
I-AIBA iza kuwonga abaphumeleleyo kuKhuphiswano lweHlabathi lwaMadoda lweeBoks ngeembasa eziyilwe kakuhle kunye namabhanti okukhumbula impumelelo yabo. Iimbasa ziya kwenziwa ngegolide eqinileyo kunye nesilivere ngokwahlukeneyo.
'Sinethemba lokunika iimbaleki zethu izizathu ezingakumbi zokuzityhala nokufezekisa ubukhulu, utshilo uMongameli u-Umar Kremlev. 'Ngesi sihloko sihloniphekileyo, iintshatsheli aziyi kufumana kuphela iimbasa kunye namabhanti okugcina kunye nokunxiba ngokuzingca, kodwa kunye nemali ebalulekileyo yebhaso. Ndiqinisekile ukuba oku kuya kukhuthaza isizukulwana esitsha ukuba siye kwiindawo zokujima zamanqindi, sizilolonge ngamandla kwaye sifikelele kwinqanaba eliphezulu.'
Iiglavu ezisemthethweni zeentshatsheli ziya kutshintsha umbala - omhlophe kunye neempawu ze-AIBA ezinemibala ziya kuthatha indawo ebomvu neblue. Umahluko phakathi kweekona uya kuhlala kwimibala yeyunifomu, nangona kunjalo, imigaqo ivumela abathathi-nxaxheba ukuba babonise imibala yesizwe kwiikiti zabo.
'Iiglavu ezimhlophe ziya kuphawula isiqalo esitsha, ubulungisa kunye nokungafihlisi kwemisitho yethu emikhulu. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba wonke umntu unethuba elilungileyo,” wongeze watsho uMongameli.
I-AIBA izinikele ngokupheleleyo ekulinganeni ngokwesini kwaye ibaphatha bonke abadlali bamanqindi ngokulinganayo. KuMnyhadala we-AIBA Women’s World Boxing Championships e-Istanbul, imbethi manqindi iya kunikwa amabhaso alinganayo kudidi ngalunye lobunzima.
17 EyeDwarha 2021
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Ubuntshatsheli be-EUBC yoLutsha kumdlalo wamanqindi waseYurophu	0
Umnyhadala wesine welizwekazi laseYurophu kulo nyaka, i-EUBC yoLutsha ye-European Boxing Championship iqale eBudva, eMontenegro.
Usuku lokuqala lokhuphiswano lwalunokhuphiswano lokuqala lwama-21. Umjikelo wokugqibela ucwangciselwe ukubanjwa ngo-Okthobha 23. Iitalente ezisencinci ezazalwa ngo-2003-2004 zikulungele ukuya kubuntshatsheli eBudva.
Umsitho wazise iindidi zobunzima obutsha. Abasetyhini bakhuphisana kwiiklasi ezili-12 zobunzima: 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 81kg kunye + 81kg, ngelixa amadoda esilwa ngo-48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63.5kg , 67kg, 71kg, 75kg, 80kg, 86kg, 92kg kunye + 92kg.
IMontenegro ayikaze isingathe nawuphi na umsitho welizwekazi kude kube ngu-2020 xa i-EUBC yoLutsha ye-Yamanqindi yase-Yurophu yaba linyathelo elitsha kwimpilo yamanqindi yelizwe. UMongameli woMbutho wamanqindi waseMontenegro Mnu Aleksandr Klemenko usebenze nzima neqela lakhe ekulungiseleleni enye i-EUBC yoKhuphiswano kwizibuko laseBudva.
Ngexesha lobhubhane we-Covid-19 ngo-2020, bebonke bangama-62 abasetyhini kunye ne-113 yamanqindi angamadoda avela kumazwe angama-22 abathathe inxaxheba kuhlelo lokugqibela lwe-EUBC yoLutsha ye-European Boxing Championship. Kulo nyaka, ubomi kwilizwekazi laseYurophu buye babuyela kwesiqhelo kwaye umdla wokuzimasa kuhlelo olutsha lwe-EUBC yoLutsha kwi-European Boxing Championship wakhula. Bebonke i-123 labasetyhini abasebatsha kunye ne-244 yamadoda angamadoda eembethi manqindi abhalisiweyo azimase uhlelo lowama-2021.
Impumelelo yasePoland, eyaseRussia neyase-Italiya kwi-57 kg yamadoda
Ukhuphiswano lokuqala kwi-featherweight (57kg) ihambise amanqindi phakathi kweembethi manqindi ezinamava. UMarcel Materla wasePoland uphumelele inani eliphezulu leetonamenti zolutsha kwilizwe liphela kwaye iinzame zakhe zahlawulwa eBudva apho wasusa khona uDergo Djukanovic waseSerbia. Ilungu leqela elitsha lesizwe laseRussia uGaroglan Khandzhanov wayelambele impumelelo kumdlalo wakhe wokuqala kwaye wawulawula umdlalo wakhe nxamnye ne-Azerbaijan's Taji Taghizada. UChristian Chessa wase-Italiya ukwabonakalise italente yakhe ngomhla wokuvula xa wasusa umHungary onamava, uMark Rozsavolgyi.
Imincintiswano emnandi kwi-lightweight (60 kg)
UDanylo Dryzhak waseUkraine ubanga imbasa yegolide kwi-pinweight (46kg) kwi-2019 EUBC Junior European Boxing Championship kwaye wanyuka waya kwi-lightweight (60kg) kulandela ukukhula kwakhe ngamandla. Umntu oneminyaka eli-18 ubudala waseUkraine wanyanzela isantya ngokuchasene noDaniil Golodenko waseMoldova kwaye wadlulela kwi-16 yokugqibela eBudva. U-Elias Idrissi waseDenmark yeyona bhokisa ilungileyo kulutsha kwiqela lesizwe elinamava ngokwaneleyo okubetha uDimitrios Nikolaou waseGrisi ngomgama omkhulu. ISalvador Flores Luque yaseSpain, iSaba Tkebuchava yaseGeorgia kunye noPawel Sulecki wasePoland babephakathi kwabaphumeleleyo kweli klasi lobunzima ngomhla woku-1.
Amazwe angama-38 azimase lo msitho eBudva
Amazwe angama-38 abhalisiweyo ngala alandelayo: IAlbania, iArmenia, iAzerbaijan, iBelarus, iBelgium, iBosnia neHerzegovina, iBulgaria, iCroatia, iSipro, iRiphabhlikhi yaseCzech, iDenmark, i-Estonia, iFinland, iGeorgia, iJamani, iJamani, iGrisi, i-Hungary, i-Israel, i-Italiya, iKosovo , Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey nase Ukraine.
14 EyeDwarha 2021
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	ENgilani kumdlalo wamanqindi, UNatasha Jonas, Abafazi kumdlalo wamanqindi	0
I-England Boxing iyavuya ukwazisa ukuba izakubamba abantu basetyhini bokuqala
INkomfa yomdlalo wamanqindi ngoMgqibelo umhla we-18 kuDisemba eLoughborough -kunye noNatasha
UJonas sisithethi esiphambili.
ULiverpudlian, olwe noKatie Taylor kwitayitile yobungcali behlabathi,
imele iBritane enkulu kwi-Olimpiki ka-2012 kwaye ilixesha lesihlanu leSizwe
Intshatsheli, iya kuncokola ngohambo lwayo kwezemidlalo, ukuphakama kwayo kunye nemilinganiselo ephantsi kunye
ubunzima awakhe wajongana nabo kwezemidlalo eyayilawulwa yindoda.
Uya kudibana nezinye iindwendwe kunye nezithethi kwinkomfa, eya kuthi ibonelele
lithuba elihle kwabasetyhini kunye namantombazana angaphezu kwama-200 kwezemidlalo - iimbethi manqindi, iklabhu
amalungu, abaqeqeshi, amagosa kunye namanye amavolontiya -ukuza kunye, babelane ngezimvo
kunye nokufunda kwaye uphefumlelwe ukuba uzibandakanye nesiseko esibanzi sabathathi-nxaxheba ababhinqileyo
Ujikeleze umxholo 'wokudiliza izithintelo', umsitho uyinxalenye yeNgilane
Ukuzinikela okuqhubekayo komdlalo wamanqindi wokulungisa ukungalingani ngokwesini kwezemidlalo kunye
vula amathuba amaninzi okuthatha inxaxheba kwabasetyhini kuwo onke amanqanaba.
Iya kuba yeyokuqala njengenxalenye yoLingano, iyantlukwano kunye nokubandakanywa kuthotho loko okuya kuba
ibanjwe ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ezizayo, kunye neziganeko ezifanayo ezicwangcisiweyo ngokuxhasa kunye
ukukhuthaza abathathi-nxaxheba abaphuma kwiindawo ezahlukeneyo ngokobuhlanga nakumdlalo wamanqindi wokukhubazeka.
“INkomfa yamanina kumdlalo wamanqindi linyathelo elibalulekileyo eliya phambili kumdlalo wamanqindi waseNgilane
ekuphuhliseni ezemidlalo ngokwembono yabasetyhini, ”yatsho iNtloko yeBoxing eNgilane
UPhuhliso loLuntu, uCharlie Ford.
“Into esifuna ukuyenza kukukhuthaza abantu ukuba bancede amanqindi namakhosikazi amantombazana aqhubeke
sikhule kwaye, ekuhambeni kwexesha, ngothotho esilucwangcisileyo, sifuna ukulixhasa
Nabani na obandakanyeka kwezemidlalo, nokuba ungubani na, okanye isini sakho, ubuhlanga,
inkanuko yesini okanye imeko yoqoqosho lwentlalo. ”
Indawo yenkomfa yiNkomfa yaseLoughborough's Holywell Park
Iziko, elibekwe kwiYunivesithi yaseLoughborough yeSayensi kunye nePaki yeShishini
9 EyeDwarha 2021
Amazwe ali-105 e-AIBA yoKhuphiswano lweeManqindi kwiHlabathi yamadoda eBelgrade
Iimbethi manqindi ezivela kumazwe ali-105 zizakuthatha inxaxheba kwi-XXI AIBA Men's World Boxing Championship eBelgrade, eSerbia. Inani leembethi manqindi ezibhalisiweyo ziimbaleki ezingama-650, irekhodi kwimbali yetumente.
Olu khuphiswano luya kubanjwa kwiindidi zobunzima ezili-13 okokuqala kwimbali ye-AIBA. Iiklasi zobunzima zandisiwe ukusuka ngo-Agasti 2021, kwaye i-Belgrade Championships iya kuba lukhuphiswano lokuqala olukhulu ngale fomathi. Umsitho uzakubonisa iintshatsheli ze-AIBA zehlabathi, kubandakanya uAndy Cruz Gomez, uRoniel Iglesias, uArlen Lopez, uJulio La Cruz, kunye noLazaro Alvarez, bonke abavela eCuba.
IBelgrade iyakwamkela iimbethi manqindi ezikumgangatho ophezulu njengoHovhannes Bachkov (Armenia), Loren Alfonso Dominguez (Azerbaijan), Wanderson de Oliveira noAbner Teixeira (eBrazil), Javier Ibanez noRadoslav Pantaleev (Bulgaria), Yuberjen Martinez Rivas (Colombia), Billal UBennama noSofiane Oumiha (eFrance), uNelvie Tiafack (eJamani), uSanjeet Sanjeet noSachin Kumar (eIndiya), uSimone Fiori (e-Itali), uReito Tsutsumi (eJapan), uSaken Bibossinov kunye no-Aibek Oralbay (Kazakhstan), Azat Usenaliev (Kyrgyzstan), Enkhmandakh Kharkhuu (Mongolia), Eumir Marcial (Philippines), Vsevolod Shumkov kunye Dzhambulat Bizhamov (Russia), Atichai Phoemsap (Thailand), Tsotne Rogava (Ukraine), Mirazizbek Mirzahalilov, Hasanboy Dusmatov kunye Shakhram Giyasov (Uzbekistan).
Imali yebhaso ebalulekileyo iya kunikezelwa kwiimbasa zetumente; Ingxowa-mali yebhaso ibekwe kwi-2.6 yezigidi zeedola. Abafumene iimbasa zegolide kudidi ngalunye baya kufumana i-100,000, 50,000 yeedola, abo bafumana iimbasa zesilivere baya kunikwa i-25,000, XNUMX yeedola, kwaye bobabini abo bafumana iimbasa zobhedu (abangene kumagqibela kankqoyi) baya kunikwa i $ XNUMX.
Ndiyakholelwa ukuba ubuNtshatsheli beHlabathi buza kuqala isahluko esitsha kwimbali ye-AIBA. Sinerekhodi labathathi-nxaxheba abakhuphisanayo kwiindidi ezili-13 zobunzima, ezingumqondiso wamandla omdlalo wamanqindi kunye nophuhliso olubanzi lwehlabathi. Sinika iimbaleki zethu awona mathuba angcono okuphumelela kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze siqinisekise ngamathuba afanelekileyo kunye nokulwa okufanelekileyo kwabo bonke abathathi-nxaxheba. Ndikulangazelele ngenene ukuvulwa kweeNtshatsheli eBelgrade, utshilo uMongameli we-AIBA uMnu Umar Kremlev.
I-AIBA Men's World Boxing Championships icwangciselwe u-Okthobha 24th-Novemba 6th, 2021.
3 EyeDwarha 2021
I-AIBA yoKhuphiswano lomdlalo wamanqindi weHlabathi yabaseTyhini eIstanbul kwasekuqaleni kukaDisemba
Kuqinisekiswe ngokusemthethweni ukuba I-AIBA yoKhuphiswano lomdlalo wamanqindi weHlabathi yabaseTyhini izakwenzeka kwisixeko saseIstanbul, eTurkey. Ngexesha lotyelelo olusemthethweni luka-Mongameli we-AIBA u-Umar Kremlev e-Istanbul isivumelwano satyikitywa phakathi kwe-AIBA kunye ne-Turkish Boxing Federation. Imihla ithathwa njengasekuqaleni kukaDisemba.
'Ndingathanda ukubulela uMphathiswa Wezemidlalo waseTurkey kunye noMnu Kremlev ngokukhetha ilizwe lethu kunye neFederation yethu njengombutho wesiganeko esibalulekileyo kwihlabathi lomdlalo wamanqindi,' uMongameli weTurkey Boxing Federation Ewe Gözgeç sitsho.
Ndonwabile ukwazisa ukuba i-AIBA Women's Boxing Championship iza kubanjelwa apha eIstanbul. I-Turkey lilizwe elikhulu lomdlalo wamanqindi kwaye inembali etyebileyo. Ndingathanda ukubulela bonke abasemagunyeni baseTurkey njengoMongameli welizwe, iNkulumbuso, uMphathiswa Wezemidlalo, uSekela-Mphathiswa Wezemidlalo waseTurkey, iNtloko yeSebe lezeMidlalo lase-Istanbul, i-Turkey Boxing Federation kunye nabanye ngenkxaso ', UMongameli we-AIBA zifunyenwe.
'I-AIBA iyatshintsha ngokukhawuleza, sisendleleni eya kuguquko olukhulu. Senza umsebenzi omninzi ngenxa yeMibutho yeSizwe, inkqubo enkulu yokunceda kunye nenkxaso yezemali iyenziwa. Sabela uhlahlo-lwabiwo mali kunye nezixhobo zemidlalo, ukunxibelelana neNFs ngqo. Sizakukhusela iimbethi-manqindi zethu kunye nabaqeqeshi kwilizwe ngalinye lehlabathi, i-AIBA likhaya labo, 'wongeze watsho uKremlev.
Ukulingana ngokwesini yenye yeenjongo zethu eziphambili kumdlalo wamanqindi. Ndonwabile ukuqinisekisa ukuba imali yebhaso leembasa ziya kufana ncam naleyo yoKhuphiswano lweHlabathi lwaMadoda. Ngethuba lokuqala kwimbali ye-AIBA yeminyaka engama-75, abaphumeleleyo beembasa baya kuvuzwa ngemali ebalulekileyo evela kwi-AIBA. Ingxowa mali yebhaso ibekwe kwi $ 2,4 yezigidi zeedola. Ibhaso lendawo yokuqala yi- $ 100 000 USD. Iimbasa zesilivere zifumana i $ 50 000 yeedola, kwaye zombini iibronzi kudidi ngalunye lobunzima zifumana i $ 25 000 yeedola, utshilo uMnu Kremlev.
Abasemagunyeni batyelele neendawo zemidlalo ukuze babeke iliso kumathuba okubamba iNtshatsheli yeHlabathi.
Ngexesha lobuNtshatsheli beHlabathi eTurkey I-AIBA yeNgqungquthela engaqhelekanga iya kubanjwa, kunye nohlaziyo olukhulu lombutho luya kubhengezwa. Iinkokheli zeNFs, iimbethi manqindi kunye neentshatsheli zeminyaka edlulileyo zizokundwendwela iTurkey, ubuNtshatsheli obuthembiswe ngokuba zezembali.
I-AIBA yoKhuphiswano lweHlabathi lwaMadoda luya kuqhubeka eSerbia, eBelgrade ukusuka nge-24 ka-Okthobha ukuya kwi-6 ka-Novemba.
Bhalisa kwi-new yethu Isiteshi se-YouTube IYAQALA nje (ividiyo yamva nje engezantsi) ngeendaba zamanqindi zamva nje neziphumo, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje umfanekiso ongezantsi okanye nayiphi na imifanekiso kuyo yonke imidiya yethu yoluntu:
29 EyoMsintsi 2021
UGethin Jenkins ushiya isikhundla sokuba yi-CEO ye-England Boxing
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	ENgilani kumdlalo wamanqindi, UGethin Jenkins	0
IGosa eliyiNtloko le-Boxing eNgilane u-Gethin Jenkins ubhengeze ukuba uzakushiya isikhundla sakhe ngoJanuwari.
Iya kuphelisa ingqesho malunga neminyaka emihlanu, sele ichongiwe ngoMeyi ka-2017.
UJenkins, owayekade esebenza njenge-CEO eCardiff City FC naseNewport Gwent Dragons Iqela leMbhoxo yeNgingqi, ukhokele umbutho ngexesha elibalulekileyo lotshintsho kunye nokukhula kwaye wakhokela i-England Boxing ngoGawulayo lwe-Covid-19, eqinisekisa ukubuya okukhuselekileyo kokuzonwabisa kunye nokhuphiswano umdlalo wamanqindi, kubandakanya iNtshatsheli yeSizwe.
“Xa inkxaso-mali yethu iqinisekisiwe kumjikelo olandelayo wenkxaso-mali, isicwangciso esitsha esigqibeleleyo, ukubuyela emva komdlalo wamanqindi kunye nenani lobulungu eliqala ukubuyela kufutshane nenqanaba langaphambi koCovid, ngoku livakala njengexesha elifanelekileyo lokudlulela phambili ," uthe.
“Zininzi izinto eziye zatshintsha, uninzi lwazo luqhutywa ngoku, ngakumbi malunga nomsebenzi wokufikelela kuluntu kunye nokusekwa kwesiseko se-England Boxing. Ngoku lixesha lokuba omnye umntu angene athathe lo mbutho kunye nezemidlalo phambili.
“Ndinqwenela ukubulela bonke abasuka kwiiklabhu, ubulungu, amavolontiya, abachaphazelekayo, abaxhasi, ibhodi ingakumbi abasebenzi abaye bandixhasa ngethuba ndisesikhundleni.
"Okokugqibela, yeyokuba abanye bagwebe, kodwa ndiyazingca ngendlela esiwukhulise kwaye sawukhulisa ngayo umbutho kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye siqinisekile, njengokuba siphuma kulo bhubhane, sikwisimo esomeleleyo sokuqhubela phambili kwaye senze inefuthe elikhulu kubomi bamalungu nakuluntu apho thina nathi sisebenza khona. ”
Usihlalo we-England Boxing Board, uCaspar Hobbs, uthe: “UGethin uzakusishiya nombutho ukwimo engcono kakhulu kunangexesha lokufika kwakhe.
"Ngexesha lakhe elawula, ebejongile utshintsho oluninzi kunye namanyathelo avela apho sinokuthi ngoku siqhubeke nokwakha kunye nokuqhubela phambili amanqindi emidlalo.
“Kumazwe aphesheya, wenze umsebenzi omninzi ukuqhuba uguquko nebhunga lolawulo lehlabathi i-AIBA njengoko umdlalo wamanqindi ujonge ukukhusela imeko yawo njengomdlalo weOlimpiki. Ndingathanda ukubhala phantsi umbulelo wethu ngayo yonke imizamo yakhe ngexesha lokulawula kwakhe kwaye ndimnqwenelela impumelelo kwikamva. ”
I-England Boxing iyakubhengeza inkqubo yokuchonga umntu oza kungena ezihlangwini zeJenkins ngexesha elifanelekileyo.
Bhalisa kwi-new yethu Isiteshi se-YouTube KUQALILE OKU (ividiyo yamva nje engezantsi- ewe, konke kuya kuthatha ixesha) ngeendaba zamanqindi zamva nje neziphumo, ukuhleba kunye nolwazi oluvela kwihlabathi liphela. Cofa nje umfanekiso ongezantsi okanye nayiphi na imifanekiso kuyo yonke imidiya yethu yoluntu:
Iimbaleki ze-AIBA zeMidlalo yoKhuphiswano lweHlabathi ukuze zifumane ibhaso lemali lokunyusa
Ngethuba lokuqala kwimbali ye-AIBA yeminyaka engama-75, abaphumeleleyo bembasa kwi-AIBA Men's World Boxing Championships eBelgrade, iSerbia iya kuvuzwa ngexabiso lemali evela kwi-AIBA. Ingxowa mali yebhaso ibekwe kwi $ 2,6 yezigidi zeedola.
Ibhaso lendawo yokuqala yi- $ 100 000 USD. Iimbasa zesilivere zifumana i $ 50 000 yeedola, kwaye zombini iibronzi kudidi ngalunye lobunzima zifumana i $ 25 000 yeedola.
“Kokokuqala i-AIBA ukuba iwonge ngokwezimali iimbaleki eziphumeleleyo kwiNtshatsheli yeHlabathi, kwaye kufanelekile ukuba kube njalo. Le mali kufanelekile kuthathelwa ingqalelo iminyaka yamalungiselelo ayimfuneko ukufumana indawo kwitumente ephezulu ye-AIBA kunye neenzame ezenziwe. Siyazi ukuba olu phuhliso luza kuba luncedo olukhulu kwiimbethi manqindi zethu. Abamele kuphumelela eringini kuphela, kodwa bazimele kwaye banempumelelo, utshilo uMongameli we-AIBA uMnu Umar Kremlev.
Unobhala Jikelele we-AIBA uMnu Istvan Kovacs ubanga ngelithi eli linge libalulekile kwiimbethi manqindi ezisebenza nzima.
“I-AIBA ibonelela iimbaleki zayo ithuba elifanelekileyo lokufumana imali nokuba nenkuthazo engakumbi. Ndiyazi ukuba zininzi kangakanani ezi zinto zinokwenzeka kwiimbethi manqindi. Ndonwabile ngabo bafumana eli thuba ngoku, kwaye ndikhokela indlela i-AIBA eyenza la mathuba enzeke iimbaleki zanamhlanje. Linyathelo elikhulu eliya kwinjongo yethu enkulu yokwakha indlela yomdlalo wamanqindi ozinzileyo, utshilo.
Ubuntshatsheli be-AIBA World Boxing buya kuqala nge-24 ka-Okthobha ngomnyhadala wokuvula omkhulu e-Štark Arena eBelgrade kwaye bafikelele kwincopho nge-13 yokugqibela ngo-Novemba 5-6.
Imithombo yeendaba yokuvunywa kweMidlalo yoKhuselo lwaMadoda kumdlalo wamanqindi eBelgrade, eSerbia kuyavulwa. Bonke abameli beendaba abanqwenela ukuthatha inxaxheba kulo msitho kufuneka bagcwalise le fomu kwiphepha elilandelayo: https: //media-aiba.or
28 EyoMsintsi 2021
I-England Boxing yoKhuphiswano lweSizwe lweZikolo-IZIPHUMO EZIPHELELEYO
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo, Iziphumo zomdlalo wamanqindi	ENgilani kumdlalo wamanqindi, Iintshatsheli zeZikolo zeSizwe, iziphumo	0
Ubuntshatsheli bokuqala belizwe laseNgilane ukusukela oko kwaqala iCoronavirus
Ubhubhane lubonakalise ukuba lukhulu kakhulu-kwaye lwazisa utyelelo oluvela kuMongameli we-AIBA u-Umar
I-England Boxing National Schools Championship eyayilindelwe ngolangazelelo
Umdlalo owandulela owamanqam kunye nowokugqibela ugqityiwe ngempela-veki (ngoMgqibelo umhla wama-25 kweyoMsintsi
NgeCawa yama-26 kaSeptemba) eVertu Motors Arena eNewcastle.
Utsale ngaphezulu kwe-200 yeyona mbethi manqindi yamantombazana kunye neyamakhwenkwe ebalaseleyo ezikolweni
ukwahlulwa-kwabo bazelwe ngo-2007 (u-Class B), ngo-2008 (u-Class A) no-2009 (Cadet) - ngubani
Bonke babenomdla wokufumana ilungelo lokuzibiza ngokuba yintshatsheli yelizwe.
Esi yayisisiganeko sokuqala ukusukela kuLutsha lweLizwe laseNgilane loMdlalo wamanqindi
Ubuntshatsheli 2020 ngoFebruwari nango-Matshi wonyaka ophelileyo ngenxa yeCovid-19-
ukuvalela urhulumente ngokunxulumene.
Izihloko kwabelwana ngazo macala onke kubuninzi besahlulo, ngamaqela angama-65 akwazi ukuziqhayisa a
Iiklabhu eziphumelele kakhulu yayiyi-duo yaseLondon i-Repton kunye ne-Rainham, eyokugqibela-
yenziwa ngexesha lokutshixwa, ngubani ophumelele isihlanu ngasinye, ngeRingi yeMidlalo yeCamberley
Kodwa bekukho impumelelo kwiiklabhu kwilizwe liphela, kubandakanya nezo zisuka kumamkeli
Ingingqi iTyne Tees kunye ne-Wear efana noPhil Thomas, Middlesbrough, Olimpiki, eMantla
Inkwenkwezi, uLutsha lweSithili, i-Houghton, iBhishophu iAuckland, iSunderland, iRedcar kunye neBirtley
(jonga ngezantsi uluhlu olupheleleyo lwabaphumeleleyo).
“Kwakumnandi ukubona umlo wamanqindi edlala kumnyhadala wesizwe emva kwexesha elide
ixesha lokuphuma kwiringi ngenxa yokutshixa, kwaye yeyiphi indlela engcono onokuqala ngayo ngaphandle kokucima
ngeenkwenkwezi zekamva? ” Utshilo uQeqeshi woPhuhliso wase-England kumdlalo wamanqindi uAmanda
“Ngokuqinisekileyo kukho iqela leembethi manqindi ezinetalente zokubeka iliso kwixesha elizayo -
amantombazana kunye namakhwenkwe- kwaye bekukho imincintiswano emikhulu phakathi kwezi, kunye
umzamo omkhulu kubo bonke abo bathathe inxaxheba.
“Ukuthathela ingqalelo ukutshixa kunye nenxaxheba edlalileyo ekupheliseni umdlalo wamanqindi
ngexa, ukuzimisela kunye nokomelela okuboniswe zezi mbethi manqindi ukuba zibuye zinjalo
have is yesibini kuye.
“Sijonge phambili ekuboneni ukuba zizokuqhubeka ntoni ezi mbethi manqindi kwaye zizuze ntoni kwi
Umnumzana Kremlev waba nguMongameli we-AIBA ngo-Novemba wonyaka ophelileyo kwaye weza kubona
Izikolo iimbethi manqindi zisebenza njengenxalenye yohambo oluya eNgilane.
Wadibana nabasebenzi baseNgilane be-Boxing kunye namagosa kwaye wanikezela ngeziqinisekiso kwabanye
abagqwesileyo bokugqibela emva kwemidlalo.
Iintshatsheli zodidi B kunye neeklasi A zavuzwa ngeiglavu zegolide, ngelixa
Amakhadethi aphumelele imbasa yegolide.
Abo baphumelele izihloko kuzo zontathu iiklasi bayamenywa ukuba baqeqeshe kunye
Abaqeqeshi be-England Talent ku Suku lweeNtshatsheli zeZikolo ngomhla wama-23, wama-24 nowama-25 ku-Okthobha.
Abaqeqeshi beetalente, yayinguRuby White (Sturminster Newton), Talia Rumbol (Newham)
kunye noLexi Walker (Great Wyrley), ngelixa ukufana kwamadoda bekuyi-Archie Coates
(URainham), uBaley Wilding (uMikey) kunye noMohammad Safari (iRingi).
Umlo wetumente kuye kwagwetywa ukuba ubukwiNdoda engaphantsi kwama-52kg Class
B ulwa phakathi kukaChadwell St Mary's Tony Saunders kunye noRainham uWilliam Howard,
apho le yokugqibela yaphumelela kukwahlukana emva kokhuphiswano olusondeleyo nolonwabisayo kakhulu.
I-Cadet yamadoda, Ngaphantsi kwama-28kg-uElijah Smith (eBurton Park) wabetha iLondon Bounsou (eNtshona
Ham) ngesigqibo esifanayo.
I-Cadet yamadoda, Ngaphantsi kwama-32kg-UJim Wilson (Phil Thomas) wabetha uJaylen Powell (Umzi-mveliso) ngu
I-Cadet yamadoda, Ngaphantsi kwama-36kg - u-Archie Coates (Rainham) wabetha uJake Alagoa (West Hill) ngu
Indoda Cadet, Ngaphantsi kwama-40kg - UDanny Lee (Birtley) wabetha uMichael Cash (Rumbles) ngu
I-Cadet yabasetyhini, Ngaphantsi kwe-44kg - uPaige Hamilton (iBilton Hall) wabetha iGeorgia White (iSt
Austell) ngesigqibo sokwahlulahlula.
I-Cadet yabasetyhini, phantsi kwe-48g-Niamh May (i-Wildcard) yabetha i-Eden Kilkenny (eMpuma
Middlesbrough) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Indoda Cadet, Ngaphantsi kwama-52kg - uHenry Dennard (Albion) wabetha uRuben Taylor (eMzantsi
Derbyshire) ngesigqibo esifanayo.
I-Cadet yamadoda, Ngaphantsi kwama-56kg - UWilliam Loveridge (iRing Sporting) wabetha u-Alfie Til (Omkhulu
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-32kg - U-Alfie Taylor Satchell (Everton Red Triangle) wabetha u-Isaac
Iwadi (iWadi Deagnans) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-35.5kg-Lewis Coaston (Redcar) wabetha iBill Connors (Pinewood)
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-40kg - UFrank Smith (Rainham) wabetha uRichard Ward (Phil
Thomas) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-43g - UNowa Barney-Smith (iRing Sporting) wabetha uConnall Farrell
(I-Birkenhead Venture) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-46kg-Umdikoni Killick (eTrowbridge) wabetha uJosh Whewell
(Gemini) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-50kg-Amanollah Sahak (Repton) wabetha u-Ishmail Esa
(Ubuchwephesha) ngesigqibo esifanayo.
Udidi lwabasetyhini A, Ngaphantsi kwama-54kg - uKimberley-May Watson (eBillericay naseWickford) babetha
ULeah Smith (eParkstone) yi-RSC.
Iqela labasetyhini A, Ngaphantsi kwama-57kg - uNapat Ramsawong Egan (Newquay) wabetha uChloe
IHolland (eParkory Park) yiRSC.
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-62kg-Mohammed Ismail (Ongoyikiyo) wabetha uSahd Iqbal
(Eastburn) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A, Ngaphantsi kwama-68kg - uLuka Harper (Weedon) wabetha uShay Pinnington
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-32kg - uGary Sigery (eBurton Park) wabetha uSaker Jayden
(ICalvedon) ngesigqibo ngamxhelo mnye.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-37kg - UTom Saunders (Rumbles) wabetha uJames Smith (Rourkeys)
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-41.5kg - uEmal Hamdan (Repton) wabetha uLeo Myers (Phil Thomas)
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-43kg - uWilliam Ball (Repton) wabetha uJed Baker (Torbay) ngu
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-48kg - URuby White (uSturminster Newton) wabetha uNeve Wright
(Aston) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-50kg - UTommy Dighton (Bodyshots) wabetha uJohn Doe (Omtsha
Saints) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-54kg - UAdam Macca (Rumbles) wabetha uOllie Strand (Leicester
IsiXeko) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-59kg - UFrankie Thompson (uBridlington) wabetha uTommy Thompson
(IHoddesdon) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-63kg - uSkye Smith (eBerinsfield) wabetha uGracelyn Parsonage
(FKB) ngesigqibo esinye.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-68kg - UJohn McDonagh (Ardwick Lads) wabetha uRiley Edison
(Imikhosi) ngesigqibo esinye.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-76kg - uKejai Bryan (Islington) wabetha uMason Butcher (Pinewood)
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwe-30kg-uKlay Munday (weSunderland) wabetha uCharlie Ward (Pinewood)
I-Cadet yamadoda ephantsi kwama-34kg-uSimon O'Donnell (Pinewood) wabetha uAljaz Uwisekhan
(ICapitol) ngesigqibo ngamxhelo mnye.
I-Cadet yabasetyhini engaphantsi kwe-40kg-uSerena Mali (Cleary's) wabetha u-Fallon Anderson
(ISunderland East End) yiRSC.
I-Cadet yabasetyhini engaphantsi kwe-42kg-uJaya Kaisi (Cleary's) wabetha uLayla Cox (Wolverhampton)
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwe-44kg-uTony Preston (Everton Red Triangle) wabetha uJames Jordan
(INewark) ngesigqibo sokwahlulahlula.
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwama-48kg - u-Archie Fleming (Powerday Hooks) wabetha uSam Evans
(I-Wirral CP) ngesigqibo sokwahlulahlula.
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwe-54kg-u-Hussain Zaman (Wakefield Trinity) wabetha uRocky Maguire
(Macclesfield) ngesigqibo esifanayo.
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwama-62kg-uJoseph Harthill (ePriory Park) wabetha uMichael Winter
(Iyangxola) ngesigqibo esivisisanayo.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-34kg - uDean Goodearl (Rainham) wabetha uLewis Cook (uChadwell
St Mary) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-37kg - uGeorge Ralph (Rainham) wabetha uTommy Lee Homer
(Darlington) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yabasetyhini A engaphantsi kwe-42kg-Lexi Clifton (ePriory Park) wabetha uJosey Newton (Tommy
Iklasi yaBasetyhini A engaphantsi kwe-45kg - URuby Cuthbertson (uLutsha weSithili) wabetha uBrooke Taylor
Iklasi yabasetyhini A Ngaphantsi kwama-48kg - UTalia Rumbol (Newham) wabetha uDaisy May Constable
(Westree) ngesigqibo esivumayo.
Iklasi yabasetyhini A Ngaphantsi kwama-51kg - URosanna Bycroft (Imikhosi) wabetha uRianna Doforo (The
Gym yaBantu) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-54kg - U-Anthony McCarthy (Holdings ezincinci) wabetha uJohn Boy
IHodgkins (kaMikey) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-59kg - iBaley Wilding (kaMikey's) yabetha uMax Pipkin (eRosehill) ngu
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-65kg - Ukutsala kukaRocco (uMkhondo kunye noKulunga komzimba) wabetha uJamie Smith
(Iringi yeMidlalo) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-72kg - UTobias Taylor (aBangcwele abatsha) wabetha uJack Morgan
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-34kg - uJorge Thompson (Middlesbrough) wabetha uJack Hayes
(Seacroft) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-38.5kg - uPatrick Cunningham (iiPowerday Hooks) wabetha uJohn
UDoran (Intliziyo yasePortsmouth) ngesigqibo esifanayo.
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-45kg - uElise Stride (Seacroft) wabetha uAlys Moffat (uBukhosi) ngu
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-44.5kg - uJake Brown (iOlimpiki) wabetha uTommy Boylan (eRosehill)
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-48kg - uLiam Davie (uJimmy Egan's) wabetha uJoe Penfold (Weston
Warriors) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-52kg - uWilliam Howard (Rainham) wabetha uTony Saunders
(UChadwell St Mary) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-56kg - UBradley Smith (uBhishophu waseAuckland) wabetha uStephen
UChadwick (Lee Jones) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yabasetyhini B Ngaphantsi kwama-60kg - uLibby Frost (Beartown) wabetha uScarlett Bewick
(Wearmouth) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-65kg - UJohn Valler (Pinewood) wabetha uRaegan Adamson (TGs) ngo
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-72kg - uJohn Joe Carrigan (iBorder City) wabetha uDrew Doherty
(UTommy Coyle) ngesigqibo esifanayo.
I-Cadet yabasetyhini engaphantsi kwama-32kg - iDollie Fellows (iHolo eluhlaza) yabetha uLeah Paylor
(Wimborne) ngesigqibo sokwahlulahlula.
I-Cadet yabasetyhini engaphantsi kwe-36kg-URuby Ferguson (iGolide yeGolide) wabetha uNevaeh Brierly
I-Cadet yamadoda Ngaphantsi kwama-38kg-uBilly Kane Watts (Repton) wabetha uBrayden Dyer (isiXeko sesi-2)
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwe-42kg-Yashua Fleming (TM Boxing) wabetha uLuka Moore (kaHenry)
I-Cadet yamadoda engaphantsi kwe-46kg-uHarvey Salomino (kwi-Bridge yaseHebden) wabetha uDavid Reed
I-Cadet yamadoda Ngaphantsi kwama-50kg - U-Alfie Donnison (Aintree) wabetha uKeenan O'Connor (uDerby
I-Cadet yabasetyhini engaphantsi kwama-56kg-UDarcy Cooper (Wimborne) wabetha uSiobhan Haley
(Hunslet) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-30kg - UJamie Preston (Rotunda) wabetha uMorgan Skyme
(Wiseman) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yabasetyhini A Ngaphantsi kwama-36kg - uLayla Straughan (North Star) wabetha u-Kianah Roper
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-38.5kg - u-Isaac Rye (Phil Thomas) wabetha uJohnny Connors (eNtshona
Ham) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-41.5kg -Humza Malik (Repton) wabetha uPatrick Purcell (Pleck) ngo
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-44.5kg - UTrey King (kaMikey's) wabetha uBenny Tokeley (West Ham)
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-48kg - UCharles Leason (St Paul) wabetha uPaddy McDonagh
(White Hart Lane) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A ngaphantsi kwama-52kg - uTom Connors (uSynwell) wabetha uLouie Kennedy (eSalisbury)
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwama-56kg - UJohnny Crittenden (Pinewood) wabetha uCianan Campbell
(Islington) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yabasetyhini A Ngaphantsi kwama-60kg-Lexi Walker (Great Wyrley) wabetha uDemi-Rose
IGreenidge (iFinchley) sisigqibo esinye.
Iklasi yabasetyhini A Ngaphantsi kwama-67kg - uElsie May Kennedy (Tenterden) wabetha uShannon
IWarren (Acocks Green) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda A Ngaphantsi kwe-105kg - uSereno Denham (Amathemba) wabetha uFreddie Simon
(Amathemba) ngesigqibo esivumelanayo.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-35.5kg-Mobeen Hussain (Umdlalo wamanqindi wenyani) wabetha uDenny Moore
(West Kingsdown) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-40kg - uEddie Doherty (iRingi yezeMidlalo) wabetha uAshten Dwyer
(I-Accrington Lions) ngesigqibo esifanayo.
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-42kg - uJolie Hopkins (Canvey) wabetha uDolly Sambrook
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-46kg-Mohammad Safari (Iringi) wabetha uDylan Grey (weSithili
Ulutsha) ngesigqibo esifanayo.
Iklasi yabasetyhini B Ngaphantsi kwama-51kg - Natcha Danielsen (Wirral CP) wabetha uChamp Cuddy-
Thomas (Finchley) ngesigqibo esifanayo.
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-54kg - Imogen French (North Road) yabetha uJackie Webster
(Attleborough) ngesigqibo sokwahlulahlula.
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-57kg - uGrace Massey (Impact) ubethe uDemi Jackson
(NgoLwesithathu) ngesigqibo esinye.
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-62kg - uKevin Richardson (Houghton) wabetha uTee Miles (uBarton
Hill) ngesigqibo esifanayo.
Iqela labasetyhini iB ngaphantsi kwe-67kg - uRubi Smallwood (eMacclesfield) wabetha uLily Simmons
Iklasi yamadoda B Ngaphantsi kwama-76kg - uLeo Atang (Imikhosi) wabetha uGeorgie Ives (West Ham) ngo
27 EyoMsintsi 2021
Iimbaleki zoMkhosi wamanqindi weHlabathi wama-58 zagqitywa eMoscow
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Iimbaleki zoMkhosi wamanqindi weHlabathi	0
Umlo wokugqibela we-58th yoKhuselo lwezeMidlalo yoMkhosi weHlabathi yabanjwa e-VTB-Arena eMoscow. Lilonke, iimbethi manqindi ezingama-231 ezivela kumazwe angama-36 kudidi lobunzima beshumi kumadoda kwaye ezintlanu kubafazi zenziwe kwitumente yaseMoscow.
Iziphumo zokugqibela zokugqibela
I-51 kg uPALTSEVA Ekaterina (RUS) woyise iSORRENTINO Giordana (ITA)
I-57 kg ABRAMOVA Daria (RUS) yoyisile iTUMURKHUYAG Bolortuul (MNG)
I-60 kg i-SOARES FERREIRA Beatriz (BRA) yoyisile i-RIOS OJEDA Krisandi (VEN)
I-69 kg i-DALGATOVA Saadat (RUS) yoyisile i-SANTOS Barbara Maria (BRA)
I-75 kg MAVLONOVA Mavluda (UZB) yoyise iKEBIKOVA Viktoria (BLR)
I-49 kg iZHUSSUPOV Temirtas (KAZ) yoyisile iCONCEICAO dos SA Leanderso (BRA)
I-52 kg ye-DVALI Dmitrii (RUS) yoyisile i-ABDIKADIR Damir (KAZ)
I-56 kg i-OGANNISIAN Ovik (RUS) yoyisile u-KHARKHUU Enkh-Amar (MNG)
I-60 kg ABDURASULOV Shunkor (UZB) yoyisa i-OPOLSKII Konstantin (RUS)
I-64 kg ASANAU Dmitry (BLR) yoyisile iTURSUNOV Mujibillo (UZB)
I-69 kg STUPIN Ivan (RUS) yoyisile iPALACIO MEDINA Christian (VEN)
I-75 kg i-NURSEITOV Timur (KAZ) yoyise uSEMYKIN Aleksei (RUS)
I-81 kg i-RADZHABOV iRadzhab (RUS) yoyisile i-HOUMR Mohammed (DZA)
I-91 kg KUTTYBEKOV Abzal (KAZ) yoyise uSAGAIDAK Ivan (RUS)
I-91 + kg ye-MULLOJONOV Lazizbek (UZB) yoyisa iTETERIN Svetoslav (RUS)
Iqela lomkhosi oxhobileyo waseRussia liphumelele iimbasa zegolide ezisixhenxe, ezine zesilivere kunye nezobhedu kwaye zaphumelela ukuhlelwa kwetumente. Indawo yesibini yathathwa ngamaqela esizwe aseKazakhstan naseUzbekistan, anegolide ezintathu, isilivere enye kunye zintathu iimbasa zobhedu inye. Indawo yesine ithathwa liqela laseBrazil (1-2-2), kwaye elesihlanu - iqela lesizwe laseBelarus (1-1-1).
Ilungu leBhodi yabalawuli be-International Military Council Council (CISM) uCarlos Verdugo:
“Ibilukhuphiswano olubalaseleyo. Ngaphandle kwamathandabuzo ndingatsho ukuba obu buntshatsheli yayisisiganeko sonyaka. Kwigama le-CISM ndiziva ndonwabile ukwamkela kunye nokuvuyisana noMphathiswa Wezomkhosi waseRussia, umbutho wamanqindi wamanye amazwe, umbutho wamanqindi waseRussia kunye neqela eliphambili lezemidlalo lomkhosi kulo msitho. Ndingathanda ukubulela amajoni ethu ahlanganisene apha ngokuzinikela kwabo kwezemidlalo noxolo. Nceda uqiniseke ukuba umhlaba kunye neCISM bayazingca ngenene ngawe. ”
Ophumeleleyo kwitumente yomdlalo wamanqindi yeHlabathi yama-58 uBeatriz Soares Ferreira:
“Ndingathanda ukubulela abaququzeleli abandinike eli thuba lokuba ndikhuphisane apha. Kuliwonga elikhulu kum ukumela iBrazil kwaye lilungelo elikhulu kum ukuba ndibuye ekhaya ndinomsebenzi opheleleyo. ”
Lilonke, iimbethi manqindi ezingama-231 ezivela kumazwe angama-36 kudidi lobunzima beshumi kumadoda kwaye ezintlanu kubafazi zenziwe kwitumente yaseMoscow.
24 EyoMsintsi 2021
Iinkwenkwezi eziphambili ezithatha inxaxheba kwi-AIBA World Boxing Championship eBelgrade
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	Abdulmalik Khalokov, UAbhinere Teixeira, I-AIBA, UAndy Cruz Gomez, UArlén López, UAziz Abbes Mouhiidine, Eumir uMarcial, I-Hasanboy Dusmatov, UHovhannes Bachkov, UJulio La Cruz, UKeno Machado, ULazaro Alvares Estrada, U-Loren Alfonso Dominguez, Mirazizbek Mirzahalilov, URoniel Iglesias, Kuthathwe iBibossinov, USalvatore Cavallaro, Sanjeet Sanjeet, Shakhobiddin Zoirov, Shakhram Giyasov, USimone Fiori, UWanderson de Oliveira, Ubuntshatsheli behlabathi kumdlalo wamanqindi, UYuberjen Martinez Rivas	0
I-AIBA ibhiyozela inyanga ukuba iqhubeke kude kube yi-XXI ye-World Boxing Championship e-Belgrade, eSerbia. Nge-24 ka-Okthobha, umsitho wokuvula omkhulu e-Štark Arena uza kunika ithuba kukhuphiswano olukhulu lwe-AIBA. Iintsuku ezimbini zokugqibela zicwangciselwe uNovemba 5-6 ngamacandelo obunzima amathandathu ngosuku lokuqala kwaye ezisixhenxe ngolwesibini.
Iimbaleki eziphezulu ezivela kumazwe amaninzi zibhalisiwe ukuba zithathe inxaxheba kulo msitho ukuza kuthi ga ngoku; ubhaliso luvulekile kude kube nge-4 ka-Okthobha.
UAndy Cruz Gomez, uJulio La Cruz, uLazaro Alvares Estrada, uArlen Lopez, uRoniel Iglesias waseCuba; UKeno Machado, uAbner Teixeira, uWanderson de Oliveira waseBrazil; UHovhannes Bachkov waseArmenia; UYuberjen Martinez Rivas waseColombia; UEumir Marcial wakwiiPhilippines; Kuthathwe i-Bibossinov evela eKazakhstan; Sanjeet Sanjeet ovela eIndiya; Hasanboy Dusmatov, Shakhobiddin Zoirov, Mirazizbek Mirzahalilov, Abdulmalik Khalokov, Shakhram Giyasov waseUzbekistan; USalvatore Cavallaro, uSimone Fiori, uAziz Abbes Mouhiidine ovela e-Itali; U-Loren Alfonso Dominguez wase-Azerbaijan kunye nabanye baphakathi kweenkwenkwezi zetonamenti.
Ngethuba lokuqala kwimbali ye-AIBA yeminyaka engama-75, abaphumeleleyo beembasa kwi-AIBA Men's World Boxing Championships baya kuvuzwa ngemali ebalulekileyo evela kwi-AIBA. Ingxowa mali yebhaso ibekwe kwi $ 2,6 yezigidi zeedola.
Ishedyuli yobuntshatsheli (yonke i-CET)
Okthobha 24, 19:00 - Umsitho oMkhulu wokuVula
Okthobha 25-Novemba 2, 13:00 no-18: 00 -Ukuqala
Novemba 3 - usuku lokuphumla
Novemba 4, 13:00 no 18:00 - semi-final
NgoNovemba 5-6, 18:00 - kumjikelo wokugqibela
23 EyoMsintsi 2021
I-AIBA iyavuma ukuba ibhodi yabalawuli yexesha lokhetho kunye nezinye izigqibo eziphambili
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA	0
Ukudibana kwi-Intanethi, iBhodi yaBalawuli ye-AIBA ivumile isishwankathelo sexesha lonyulo, yenze amanyathelo kunyulo lwabameli beembaleki kwaye yamkela amanye amanyathelo ajolise ekunikezeleni iinguqu ze-AIBA kulawulo olufanelekileyo, kwezemali nakwezemidlalo. Ngomhla we-12 kuDisemba, i-AIBA iya kubamba iCongress njengenyathelo lokuqala ekubambeni unyulo lweBhodi yaBalawuli. Ngokusekwe kwiingcebiso ezivela kwiqela leengcali zolawulo ezizimeleyo ezikhokelwa nguNjingalwazi uGqirha Ulrich Haas, i-AIBA ijolise ekwamkeleni iikhrayitheriya zokufaneleka kunye neendlela zokuqinisekisa ngoDisemba, ngaphambi konyulo olwaluza kwenzeka ngo-2022.
“Iimbethi manqindi kunye nabo babaxhasayo kufanelekile ukuba baqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba ubunkokheli babo bubunkokheli obulungileyo kwaye basebenzise amalungelo abo entando yesininzi ngokufanelekileyo, utshilo uMongameli we-AIBA u-Umar Kremlev. "Ukwamkelwa kwemigaqo engqingqwa kuya kuqinisekisa ukuba olu lonyulo lwenziwa kwinqanaba lolawulo olufanelekileyo endikholelwa ukuba luza kuba ngumzekelo kwabanye."
Ngokusekwe kwizigqibo ezenziwe ngolwe-Lwesibini, unyulo lwe-AIBA lweembaleki oluza kubanjwa okokuqala kwi-AIBA Men's World Boxing Championship eBelgrade. Olunye unyulo luza kubanjelwa kwi-AIBA Women's World Boxing Championship, kulindeleke umhla kunye nomsindisi uqinisekiswe kungekudala. Kwaqinisekiswa, okwangoku, ukuba ukuzibophelela kwe-AIBA ekulinganeni ngokwesini kuyakwandiswa kubandakanya imali yebhaso elinganayo yamadoda nabasetyhini kwinqanaba leNtshatsheli yeHlabathi.
Imfezeko yezemali yayikwi-ajenda, kunye nokubandakanyeka komphicothi zincwadi kunyaka-mali 2020-21. IBhodi yabaLawuli ikwaqwalasele iinkqubo zangoku kubapempe nasekugwebeni inkqubo yokhetho lweeNtshatsheli zeHlabathi ezizayo, kubandakanya nemigaqo esetyenziswe liQela le-IOC le-Boxing Task Force njengokujonga ngasemva kunye neendlela zokukhetha ezichanekileyo.
“Ukunikezela ngamathuba afanelekileyo kunye nomlo olungileyo weembethi manqindi kusembindini we-AIBA kwaye ndiyazingca ngeenguqu esizenzayo ukuzalisekisa ezo zithembiso zibalulekileyo,” uqhubeke watsho uMongameli uKremlev. “Sijonge phambili ekwamkeleni ezona mbethi manqindi zibalaseleyo ehlabathini eBelgrade kwiiveki nje ezimbalwa. Kwaye siqinisekile ukuba iyakuba lithuba kubo bobabini iimbaleki kunye ne-AIBA yokubonisa ukuba bangaqhuba kakuhle kangakanani. ”
(Ukuba uyayithanda into esiyenzayo okanye unqwenela ukunceda ukugcina iBoxen247.com ingekho simahla, sixhase apha ngezantsi- nokuba yikhofi nje ukuthi enkosi)
22 EyoMsintsi 2021
I-AIBA ipapasha iimeko zeembethi manqindi zaseRussia kwiNtshatsheli yeHlabathi
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	I-AIBA, Iimbethi manqindi zaseRussia, Ubuntshatsheli behlabathi kumdlalo wamanqindi	0
Iqela lesizwe laseRussia liya kukhuphisana kwi-AIBA World Boxing Championship phantsi kweflegi ye-Russian Olympic Committee (ROC), ngokwesigqibo esikhutshwe yiBhodi yaBalawuli ye-AIBA ngomhla wama-21 Septemba 2021.
Ngomhla we-17 kweyoMnga yowama-2020, iNkundla yoLamlo lwezeMidlalo (i-CAS) ikhuphe iwonga kwityala eliphakathi kwe-Arhente yokuLwa nokuNqanda iziDambisi (i-WADA) kunye ne-Arhente yeSizwe yokuLwa nokuNqanda iDoping (i-RUSADA). Kule mbasa, i-CAS igwebe ukuba i-RUSADA ibingahambelani neKhowudi yeHlabathi yokuLwa noTywala, kwaye ngenxa yoko, ikhuphe inani le-odolo eziqale ukusebenza nge-17 Disemba 2020 kwaye ziya kuhlala zisebenza kude kube ngumhla we-16 Disemba 2022. umtyikityo weKhowudi, i-AIBA inyanzelekile ukuba ithobele iMbasa ye-CAS kunye nokuqinisekisa ukumiliselwa kwayo kumdlalo wamanqindi.
Iimbethi manqindi zaseRussia kunye nabasebenzi benkxaso baya kungeniswa kwaye bamele «iRussian Boxing Federation» kwaye basebenzise «RBF» njengesifinyezo. IPierto Concerto kaPyotr Tchaikovsky yeNombolo 1 iya kudlalelwa yonke imithendeleko.
Esi sigqibo samkelwe yiBhodi yaBalawuli ye-AIBA ngomhla wama-21 Septemba 2021. Siqala ukusebenza ngoko nangoko kwaye siza kuhlala sisebenza de kube ngumhla we-16 Disemba 2022.
Isigqibo esipheleleyo siyafumaneka kwi ikhonkco.
21 EyoMsintsi 2021
Iziphumo zomhla wesi-2 kwi-World Military Boxing Championship eMoscow
IBoxen247.com Umdlalo wamanqindi ongahlawulwayo	Abendego Kayloo, I-AIBA, UAitzhan Ashirhan, UAleksandar Nikolic, UAleksei Mazur, U-Beatriz Ferreira, IBusmeo Kwak, UDaria Abramova, UDzmitry Asanau, Ipaki yaseJinhun, UKrisandi Rios Ojeda, UKyana Mazera, U-Lorye Ruyer, U-Mohammad Musatat, U-Muhammad Saeed, UNarek Hovhannisyan, UNune Asatrian, URaykhona Kodirova, USitora Turdibekova, UTemirtaz Zhussupov, Iimbaleki zoMkhosi wamanqindi weHlabathi	0
Umlo owomeleleyo wenziwa kusuku lwesibini kwi-World Military Boxing Championship eMoscow, eRashiya.
UDzmitry Asanau waseBelarus ubonakalisile ukuba uphakathi kweenkokheli ezingama-64 kg ezibhiyozela ngazwi linye u-Narek Hovhannisyan waseArmenia. Kwakwelo candelo linye, u-Mohammad Musatat wase-Syria ukhuphe u-Kyana Mazera wase-Cote D'Ivoire kumjikelo wesibini. Kumlo onomtsalane, u-Aitzhan Ashirhan wase-Kazakhstan waphumelela u-Aleksei Mazur wase-Russia ngesigqibo sokwahlukana kwe-3: 2.
Intshatsheli yase-Europe u-Daria Abramova wase-Russia uphumelele ukhuphiswano lwakhe kwi-57 kg ngokuchasene ne-Asia Champion uSitora Turdibekova wase-Uzbekistan.
U-Lorye Ruyer wase-France kunye no-Krisandi Rios Ojeda wase-Venezuela bobabini baphumelele umlo wabo phambi komdlalo wokugqibela kwaye bahlangana kumdlalo wamagqibela kankqoyi we-60 kg. Udidi lobunzima endiluthandayo uBeatriz Ferreira waseBrazil wadibana noNune Asatrian waseRussia. Isigqibo sokwahlulahlula sachithwa ngenxa yeFerreira emva koqhanqalazo lwaseBrazil. Itshaba lakhe elilandelayo nguRaykhona Kodirova waseUzbekistan.
UTemirtaz Zhussupov ovela eKazakhstan ngamxhelo-mnye waphumelela iBusmeo Kwak evela eMzantsi Korea kwi-49 kg. UAbendego Kayloo waseKenya womelele kunoMuhammad Saeed wasePakistan ngobunzima obulinganayo.
Kwi-75 kg, iJinhun Park yaseMzantsi Korea yamisa uAleksandar Nikolic waseSerbia kumjikelo wokuqala.
Iziphumo zeSession 5
Iziphumo zeSession 6
Iziphumo zeSession 7
Iziphumo zeSession 8
Ishedyuli yomhla wesi-3